Dr. Tint Swe's Writings: August 2015
ဆရာ ကျန်းမာရေးမဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံရေးပါ။ အမေစု့့။ ဗေဒင့့်။
မနေ့ကလည်း ကျမတို့နေပြည်တော် သပြေကုန်းဈေးနားမယ် အမေစုဟောပြောပွဲရှိတာ ဟောပြောပွဲမတိုင်ခင် ၁ နာရီအလိုမှာ အဖျက်လုပ်ရပ်လုပ်ပါတယ်။ အဲထဲမှာ ကျမတို့ဈေးက ကောင်မလေးတယောက်တောင် အဖျက်ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်တာ ပိုက်ဆံရလို့ သွားကိုင်တာတွေ့တယ်ဆရာ။ ကျမပြောချင်တာလေးတွေပါ။
အသိပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လာမယ့်လွှတ်တော်မှာ အနည်းဆုံး ပိုစတာကိုင်ခ ဥပဒေတင်ရတယ်။
၁၉၉ဝ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကာလ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံတွေကို ပုလဲမြို့နယ် ၁၉၉ဝ NLD အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တွေထဲက သတ္တိအကောင်းဆုံးတဦးဆီကနေ ၈-၂-၂ဝ၁၄ မှာ ရရှိပါတယ်။
ပုလဲမဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ် (၂)
စစ်ကိုင်းတိုင်း ပုလဲနဲ့ နေ့ရောညပါ (အိပ်ချိန်ကလွဲရင်) အဆက်အသွယ်တွေ ရနေတယ်။ ကိုယ့်နယ်ကိုယ် နိုဝင်္ဘာအမီ အားပေးဝိုင်းကူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က တယောက်ကပြောတယ်။ မုံသွင်၊ ချင်ပြစ်မှာ ဆရာမတွေကနေ ကလေးတွေကို ခိုးနည်းကိုအားကျအောင်လုပ်ပေးပြီး၊ အနာဂတ်ကို ဖျက်ဆီးနေတယ်တဲ့။
ကျွန်တော်က ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဖက်ကနေ အမြဲဘက်လိုက်တတ်လို့ ရှင်းအောင်ပြန်မေးရတယ်။
သည်လိုဆရာ့့ ပုလဲနယ်က ထင်ပေါ်ကြော်ကြားသူတဦးအကြောင်း စာစီစာကုံးရေးခိုင်းတယ်။ အဲတာ ဦးကျော်ဆန်း အကြောင်းတဲ့။
ကျွန်တော်တို့ပုလဲက တောမြို့လေးပါ။ ထင်ပေါ်လှတာမဟုတ်ပါ။ လွတ်လပ်ရေးရကာစမှာ သူပုန်တွေကြီးစိုးလို့ နာမည်ထွက်ပါတယ်။ အလံနီတွေလှုတ်ရှားခဲ့တယ်။ သခင်စိုးရဲ့အသံလွှင့်ရုံက ပုံတောင်ပေါ်မှာ ရှိခဲ့တယ်။ ဦးကျော်ဆန်း ဖခင်ကလည်း အလံနီပဲ။
မဆလခေတ်မှာတော့ သိပ်မထူးလှပါ။ စစ်အစိုးရရောက်တော့ နာမည်ပြန်ထွက်လာတယ်။ တက်လာတာတော့ မဟုတ်ပါ။ ပုလဲအနောက်ဖက် ၆ မိုင်ဝေးတဲ့ မင်းတိုင်ပင်ရွာဟာ ကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်းဇာတိ ဖြစ်တယ်။ ဦးကောင်းရဲ့မိခင် မယ်မင်းဆီအုတ်ဂူလည်းရှိတယ်။ ဦးကောင်းမွေးနေ့ နှစ် (၁၄ဝ) တုံးက ဦးလေးတယောက်ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ မင်းတိုင်ပင်မှာ ပွဲတခုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။ အဲဒီတုံးက ကျွန်တော်က ဆေးကျောင်းသားပဲရှိသေးတာ။
(နဝတ) ခေတ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဆန်း ဒုဝန်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ ဗခက ခင်ညွန့်နဲ့အတူ မင်းတိုင်ပင်ကို ရောက်လာပြီး ရွာဦးကျောင်းမှာ အစဉ်အဆက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့တဲ့ ကင်းဝန်မင်းကြီးရဲ့ အမွေအနှစ်တွေကို သယ်သွားတယ်။ ဒိနောက် ဗခ ကျော်ဆန်းက ဝန်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ စစ်ယူနီဖေါင်းချွတ်ပြီးတော့ ဦးကျော်ဆန်းက ဝန်ကြီး ထပ်ထပ်ဖြစ်တယ်။ သူ့ကြောင့် ပုလဲနယ်ဂုဏ်တက်တယ်လို့ထင်တဲ့သူလည်းရှိမယ်။ သဘောမတူသူတွေလည်းရှိတယ်။ သူနဲ့ကျွန်တော် အမျိုးမကင်းပါ။
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်ကရေးခဲ့ရတဲ့စာစီစာကုံးကတော့ မကောင်းသူပယ် ကောင်းသူကယ်။
၁၉၉ဝ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၇ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပုလဲ မဲဆန္ဒနယ်မြေ၊ အမှတ် (၁) ဦးသန်းစိန် (ကွယ်လွန်) နဲ့ အမှတ် (၂) ဒေါက်တာတင့်ဆွေတို့ တခဲနက်အနိုင်ရခဲ့ကြပါတယ်။
NLD စည်းရုံးရေးမှူးတွေအားလုံး ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပေမယ့် စစ်အစိုးရ အစိုးမရတာသိလို့ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် ရက်တွေကြာပြီးမှ မကွေးတိုင်း၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊ ကျောရွာကိုသွားပြီး အောင်ပွဲခံခဲ့ကြရပါတယ်။
၁၉၉ဝ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံတွေထဲမှာ ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ ဂန့်ဂေါလုံချည်ဟာ ခမောက်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အိန္ဒိယမှာ ၂၄ နှစ်ကြာနေခဲ့ရတုံးက (အာဆမ်) ခေါ် အာသန်ပြည်နယ်မြို့တော် (ဂဝါဟာတီ) ကို မကြာမကြာ သွားပြီး ဗမာပြည်အရေး ဟောပြောခဲ့ရတယ်။ အာသန်ဆိုတာ မြန်မာဘုရင်တွေ သွားတိုက်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့။ အာသန်လူမျိုးတွေရဲ့ သင်္ကေတက ခမောက်ဖြစ်တယ်။ လေးစားယုံကြည်သူကိုသာ ခမောက်ကို လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးကြတယ်။
အစည်းအဝေးတွေကနေပေးလို့ အာသန်ခမောက် နှစ်လုံးရဘူးတယ်။ ဒေသပြောင်းလာရတော့ သယ်မလာနိုင်လို့ မမောက်တွေကို အသေအချာလက်လွှဲ ပေးထားခဲ့ရတယ်။ အာသန်လူမျိုးတွေက သူတို့ရဲ့အမြတ်တနိုးခမောက်ကို မရိုမသေလုပ်သူကို လိုက်သတ်တယ်တဲ့။
၁၉၉ဝ တုံးကလူထုဆန္ဒကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ခမောက်ကိုအသက်ဆုံးတဲ့အထိ ကာကွယ်သွားမယ်။ ခမောက်သင်္ကေတ ဘယ်ရောက်ရောက် လူထုဆန္ဒကတော့ ခိုင်မြဲတယ်။ ၁၉၉ဝ ကလိုပဲ ၂ဝ၁၅ မှာလည်း လူထုကပြသကြလိမ့်မယ်။
၁၉၉ဝ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံတွေထဲက ကျွန်တော့်ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပြီး အသက်မေးလို့ ၄၂ နှစ်လို့ဖြေပါတယ်။ မိတ်ဆွေတယောက်က နုပျိုခြင်းတွေ လေကြမ်းကြမ်း နေကြမ်းကြမ်းနဲ့ တိုက်စားသွားလို့ မှတ်ချက်ပေးလာတယ်။
မြို့သာမှာ တိုက်နယ်ဆရာဝန်လုပ်စဉ်က တောကျောင်းဆရာတော်က ကျွန်တော့်အသက်ကိုမေးတယ်။ အဲဒီတုံးက ကျွန်တော့်အသက်က ၃ဝ တောင်မပြည့်သေးပါ။ အသက် ၄ဝ ဆိုတာ လူ့သက်တမ်းမှာ အသန်စွမ်းဆုံးလို့မိန့်ပါတယ်။
အဲဒီအသန်စွမ်းဆုံးအချိန်မှာ ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးထဲ စရောက်ပါတယ်။ စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ အစွမ်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လေကြမ်းကြမ်း နေကြမ်းကြမ်းဒဏ်တွေကို အန်တုနိုင်ပေမယ့် ဇာတာသက်က ဆက်သွားနေပါတယ်။
နေညိုချိန်လို့လည်း တွက်မနေပါ။ ခုနေမှာ အသန်စွမ်းဆုံးအရွယ်တွေအများကြီးက ဆက်လုပ်နေကြလို့ အိုကြီးအိုမတွေလည်း နူပျိုလန်းဆန်းရပါတယ်။
သူတို့တတွေပါ ကျွန်တော်လို့ စမြုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ကာလမှာတော့ မြန်မာပြည်ဟာ သာယာနေမှာပေါ့လို့ မျှော်ကြည့်နေမိပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့်ပို့စ်တခု = Khamauk ရာဇဝင်ထဲက ခမောက်
ကွန်မင့်တခု = Ye Thit ဥပါဒန်ကတယ်ကြီးသကိုး။ ၁၉၉ဝ ကသားမမွေးသေးဘူး အခုလူပျိဖြစ်နေဘီ။ အတိတ်ကို ထားလိုက်ပါ။ အနာဂါတ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ထင်ပါ့ဗျာ။
Tint Swe မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတော့ ကျွန်တော် မမွေးသေးပါ။ ဒါပေမယ့် မေ့ထားလို့တော့မရပါ။ (အနာဂတ်) လို့ ရေးရပါတယ်။ အနာဂတ်ကို အပြုသဘောမြင်တာတော့ ကောင်းပါတယ်။
ဥပါဒါန်နဲ့ မေ့မထားတာ မတူပါ။
- ဥပါဒါ = မှီ၍၊ စွဲ၍၊ အကြောင်းပြု၍၊
- ဥပါဒါန = ကပ်ငြိခြင်း၊ မြဲစွာယူခြင်း၊ စွဲလမ်းခြင်း၊ ကပ်၍ယူခြင်း၊
George Santayana (ဂျော့ စန်တာယာနာ) အမည်ရှိတဲ့ စပိန်လူမျိုးဖြစ်ပြီး အမေရိကမှာကြီးပြင်တဲ့ ဖီလော်ဆော်ဖါ၊ ကဗျာဆရာ၊ အက်ဆေးဆရာ၊ ဝတ္ထုရေးဆရာတဦးရှိတယ်။ သူ့ရဲ့အကြော်ကြားဆုံး အဆိုတခုကတော့ -
အတိတ်သမိုင်းကို သတိမရသူဟာ အဲတာကိုထပ်လုပ်မိဖို့ရာ ဒဏ်သင့်ခံထားရသူသာဖြစ်တယ်တဲ့။
ကွန်မင့်တခု = ရဲရဲ ရင့်ရင့် Friend SSW ရေ့့ တော်ရုံတန်ရုံပဲ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ အမေစုလည်း ဒီလိုနဲ့ သာယာ နစ်မျောသွားတယ်။
အဲလိုသတိပေးတာ ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကောင်းကောင်းနာလည်တယ်။ စိတ်တော့မပူပါ။
လူတွေထဲမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု များတာ-သင့်တာ-နည်းတာတွေ အခွင့်အခါတိုင်းမှာရှိကြတယ်။
ကျွန်တော်က ဒေါ်စုမဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ပါဆိုတာ ဒေါ်စုအဲလိုဖြစ်နေတယ်လို့ မထင်တာရယ်၊ ဂုဏ်ကြီး-နာမည်ကြီး မဟုတ်တာနဲ့ တာဝန်ရှိမှုအရ နှိုင်းမရတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တချက်က ကျွန်တော်က မြေပြင်ပေါ်မှာသာချည်းနေရသူဖြစ်ပါတယ်။ တခါတခါ မြေကြီးအောက်တောင် ရောက်ရသူလည်းဖြစ်တယ်။ ချီးမွမ်း-ကဲ့ရဲ့ဆိုတဲ့လောကဓံကို ကောင်းကောင်း နောကျေလာနေပါပြီ။ သူများတွေကိုသာ လောကဓံတရားထဲက အနုတ်သဘောလေးခုကိုကြုံရင် စိတ်အားမငယ်ကြဘို့ရာ လောကဓံတရားအပေါင်းလေးခု ဖြစ်တာမှာလည်း စိတ်လှုပ်ရှားမှု မများဘို့ဆိုပြီး ပြောပြနေသူဖြစ်ကြာင်းပါဗျာ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က ချီးမြှောက်စကားကိုသာယာပြီး လွတ်သွားသူမဟုတ်ပါ။ လွန်မြောက်သူလည်း တကယ်ကိုမဟုတ်ပါ။ လောကဓံကို ကြံ့ကြံ့ခံနေကြသူတွေထဲက တယောက်သာဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်မင့်တခု = ကုလားမပါရင် ထောက်ခံတယ့့့့်။
ကုလားဆိုတာ ဘာကိုပြောသလည်း မသိပါ။
မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ သန်း ၅ဝ ကျော်ထဲမှာ တခြားတိုင်းတပါးသွေးတွေအပြင် အိန္ဒိယသွေး (ပန်ချာ၊ တမီးလ်၊ မဒရပ်ဆီ၊ ဘီဟာရီ၊ ဘင်္ဂါလီ၊ ဇေတပါရီ)၊ မဏိပူသွေး (ကသည်း၊ ပုဏ္ဏား) အရှေ့ပါကစ္စတန်သွေး (ခေါ်တော၊ ဘင်္ဂါလီ)၊ နီပေါသွေး (ဂေါ်ရခါး) သွေးပါသူတွေ နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတိုင်းမှာ ပါနေတယ်။ ပြည်ခိုင်းဖြိုးမှာ အမတ်တွေတောင်ပါတယ်။ တခြားပါတီတွေမှာ မပါပါ။
၂ဝ၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အင်းတော်ကဦးစောလှိုင် (ကွယ်လွန်) ကို ပန်ချာသွေးပါတယ်ဆိုပြီး ပယ်ခံရလို့ NLD က ၄၄ ယောက်မှာ ၄၃ ယောက်သာ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၁၉၉ဝ မှာရွေးကောက်ခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်။
တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူတိုင်း ဘယ်သွေးပါနေနေ၊ ဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်နေနေ တန်းတူညီမျှမှုရှိကြပါတယ်။ အဲတာက စစ်အုပ်စုအလိုကျရေးထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရဖြစ်ပါတယ်။
Kala ကလား (ကုလား) ဆိုတာ အိန္ဒိယမှာ ကလေးနာမည်တခုဖြစ်တယ်။ အသားမည်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။ ဗမာပြည်မှာ ကုလားကို အသားမည်းတယ်လို့ပြောကြပေမယ့် ပန်ချာသွေးပါတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ အနောက်တိုင်းအဖြူမတွေလို အသားဖြူတယ်။
Kala ကလားဆိုတာ ဟင်ဒီလို အချိန်ရဲ့ဘုရားသခင်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ နောက်အဓိပ္ပါယ်တခုက ကလားဆိုတာ အင်မတန်ချောမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။
Kala စာလုံးဟာ ဟာဝေယန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်နဲ့ စကင်ဒီနေဗီးယားမှာလည်းရှိတယ်။ Sarah ဆာရာ ဆိုတာ ကလားဖြစ်တယ်။
၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကုလားဖဲတချပ်ကို ဖဲသမားက မကစားမီကတည်းက လက်ထဲဝှက်ကိုင်ထားတာကို သိစေချင်ပါတယ်။
Harvoni (sofosbuvir 400 mg + ledipasvir 90 mg) ဆေးဟာ HCV genotype 1 အသည်းရောင် (စီ) ဂျီနိုအမျိုးအစား (၁) အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် ၉၄% - ၉၉% ထိရောက်တဲ့စားဆေးဖြစ်တယ်။ မူရင်း အမေရိကန်ဆေးကုမ္ပဏီ Gilead Sciences ရောင်းဈေးများလွန်းလို့ အိန္ဒိယအပါအဝင် တခြားတိုင်းပြည်တွေက ဆေးကုမ္ပဏီတွေကို ဈေးချုချိုနဲ့ ဆေးကို Generic name နာမည်ရင်းအတိုင်းထုတ်ဖို့အတွက် လိုင်စင်ပေးထားပါတယ်။
Harvoni ကို ယူအက်စ်မှာ ၂၈ လုံး (၄ ပါတ်စာ) ကို အနည်းဆုံး $32,138 ကုန်ကျတယ်။ ၁၂ ပါတ်အတွက် $94,500 ကနေ $96,414 အထိကုန်ကျပါတယ်။ အိန္ဒိယကနေ လာမယ့်နိုဝင်္ဘာနောက်ပိုင်းကစပြီး တရားဝင်ထုတ်ရောင်းနိုင်မယ်လို့ ၂၈-၇-၂ဝ၁၅ နေ့သတင်းကဆိုပါတယ်။ သတင်းအရတော့ ၁၂ ပါတ်စာ $2,500 ကုန်ကျမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။
Harvoni side effects ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ = အားယုတ် (17%)၊ ခေါင်းကိုက် (16%) နဲ့ ပျို့-အန်ချင်၊ ဝမ်းပျက်နဲ့ အိပ်မရတာတွေဖြစ်တယ်။
Hepatitis C genotypes2နဲ့3တွေအတွက် Gilead Sciences ကနေထုတ်တဲ့ Sovaldi ဆေးကအကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးကိုလည်း ယူအက်စ်မှာ တပြားကို $1,000 နဲ့ ၁၂ ပါတ်စာ $84,000 ပေးရပြီး ဈေးချိုတဲ့ဆီမှာ ၁၂ ပါတ်စာကို ဒေါ်လာ ၁ဝဝဝ ထက်မပေးရအောင်စီစဉ်နေတယ်လို့ သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။
မှတ်ချက်။ မြန်မာပြည်မှာ ဆေးဈေးနဲ့ဝယ်ရမယ့်နေရာကို မသိပါ။ ဆောရီး။
Htein Linn လူတစ်ယောက် ဆန္ဒမဲ သုံးခုပေးရမယ်ဆိုတာကို သိတဲ့သူ အတော်နည်းနေတယ်ပြောရမယ်ဆရာ။ နယ်မြို့မို့လို့လားမသိဘူး။ စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းကြတယ်။
ဟုတ့့် အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက်တမဲ + ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်တမဲ + တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အတွက်တမဲ၊ မဲပေးခွင့်ရှိသူတိုင်းမှာ စုစုပေါင်း (၃) မဲစီပေးပိုင်ခွင့်ရှိကြပါတယ်။ မဲပုံး (၃) မျိုးရှိမယ်။ သက်ဆိုင်တဲ့မဲကို သက်ဆိုင်တဲ့ မဲပုံးထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ထည့်ရပါမယ်။
သုံးမဲလုံးကို ပါတီတခုတည်းက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ထည့်မှာလား၊ သုံးမဲကို သုံးပါတီ ခွဲပေးမှာလား။
ကလေးသုံးယောက်ကို မုန့်ဝေသလိုမလုပ်သင့်ပါ။ ပံ့သကူ အလှူလိုလည်းမလုပ်သင့်ပါ။ ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ အကြိုက်ဆုံးပါတီမှာ ပုံအောလိုက်ပါ။
လက်ရှိနိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေးစတာတွေကို အားရကျေနပ်တယ်ဆိုရင် အဟောင်းကိုသာပေးပါ။ ပိုကောင်းစေချင်တယ်ဆိုရင် အသစ်ကိုပေးပါ။ အသစ်ဆိုတာ တခါမှမကြားဖူးသေးတဲ့ပါတီ မဟုတ်ပါ။ ၁၉၉ဝ တုံးက မဲဆန္ဒနယ်ပေါင်း ၄၈၅ နေရာရှိတာ ၃၉၂ နေရာမှာ NLD ပါတီကိုသာမဲပေးခဲ့ကြတယ်။
အများက အားဖြစ်တယ်။ စုန်းမပြူးစေလိုပါ။ ဘီလူးသူရဲတွေလည်း မဲပေးတာကိုချောင်းကြည့်မနေပါ။ မြားသုံးစင်းလုံးကနေ ပစ်မှတ်ကိုထိမှန်ပါစေ။
Treatment of HCV Genotype 1 အသည်းရောင် (စီ) ဂျီနိုအမျိုးအစား (၁) ကုသခြင်း
အသည်းရောင် (စီ) ဂျီနိုအမျိုးအစား (၁) ဟာ ၇ဝ-၇၅% နဲ့အများဆုံးဖြစ်တယ်။ ဆေးကုသမှုလေ့လာမှုကိုလည်း အများဆုံး လုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ အစဉ်အလာအရ အကုရခက်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးပေါ်စားဆေးနည်းဟာ ၉ဝ% မက ထိရောက်မှု ရှိပါတယ်။
အသည်းရောင် (စီ) ဂျီနိုအမျိုးအစား (၁) အစပျိုးကုသခြင်းအတွက် ၁၉၉၈ ကနေ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အထိတုံးက
- Interferon ထိုးဆေးတမျိုးတည်းနည်း၊
- Peginterferon ထိုးဆေးတမျိုးတည်းနည်း၊
- Peginterferon + Ribavirin ထိုးဆေး + စားဆေးနည်း၊
- Peginterferon + Ribavirin +aNS3A/4A protease inhibitor (Boceprevir or Telaprevir) ဆေး ၃ မျိုးတွဲနည်းကို သုံးခဲ့တယ်။
၂ဝ၁၃ ကနေ ၂ဝ၁၄ အတွင်းမှာ Peginterferon + Ribavirin + either Sofosbuvir or Simeprevir ဆေး ၃ မျိုးနည်းသစ်သုံးခဲ့တယ်။
၂ဝ၁၅ မှာတော့ daclatasvir, fixed-dose ledipasvir-sofosbuvir, fixed-dose ombitasvir-paritaprevir-ritonavir and dasabuvir, simeprevir, and sofosbuvir တွေကိုသုံးလာပါတယ်။ Daclatasvir ကိုတော့ FDA ကနေ အသိအမှတ် မပြုရသေးပါ။
ဘယ်လိုလူနာတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလည်း = genotype subtype (1a or 1b) ဖြစ်ရမယ်။ အရင်ကလည်းကုဖူးမယ်နဲ့ အသည်းလည်းခြောက်နေမယ်။
အမေရိကန် AASLD/IDSA/IAS-USA လမ်းညွှန်ရ အသည်းရောင် (စီ) ဂျီနိုအမျိုးအစား (၁) အစပျိုးကုသနည်း
(က) ledipasvir-sofosbuvir နည်း၊
(ခ) ombitasvir-paritaprevir-ritonavir and dasabuvir, with or without ribavirin နည်း၊
(ဂ) sofosbuvir + simeprevir with or without ribavirin နည်း သို့မဟုတ်
(ဃ) daclatasvir + sofosbuvir, with or without ribavirin နည်းတွေဟာ ထိရောက်မှုတူညီတယ်။
Ribavirin ဆေးပါပေးမလား မပေးဘူးလားဆိုတာ ဂျီနိုအမျိုးအစားခွဲနဲ့ အသည်းခြောက်တာအပေါ်မှာမူတည်တယ်။
ဂျီနိုအမျိုးအစားခွဲမသိဘူးဆိုရင် genotype 1a အနေနဲ့ကုသရမယ်။
အသည်းရောင် (စီ) ဂျီနိုအမျိုးအစား (၁) ကိုအရင်က peginterferon + ribavirin တွေနဲ့ ဆေးကုဘူးထားပြီး မရသေးရင်
(က) ledipasvir-sofosbuvir with or without ribavirin နည်း၊
(ခ) ombitasvir-paritaprevir-ritonavir and dasabuvir with or without ribavirin နည်း၊
အသည်းခြောက်မနေရင် ledipasvir-sofosbuvir ဆေးကို ၁၂ ပါတ်ကြာပေးရမယ်။
အသည်းခြောက်နေရင် ledipasvir-sofosbuvir ဆေးကို ၂၄ ပါတ် သို့မဟုတ်
ledipasvir-sofosbuvir + ribavirin ၁၂ ပါတ်ကြာပေးရမယ်။
အဲဒီဆေးတွေက တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ ခက်နေသေးတာက ဈေးကြီးတာပဲ။ ယူအက်စ် AASLD/IDSA/IAS-USA လမ်းညွှန်အတိုင်းကုသရင် ကုန်ကျစရိတ်ဟာ $63,000 ကနေ $300,000 အထိရှိတယ်။
မှတ်ချက်။ မြန်မာပြည်မှာရပြီလား၊ ဘယ်မှာဝယ်ရမလည်း မသိပါ။ ဆောရီး။
ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲနေသူပေါင်း တနေရတည်းမှာ သန်းတထောင်အထိရောက်တယ်လို့ ဖေ့စ်ဘွတ် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ (မာ့ခ် ဇူကာဘဂ်) ကနေ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသား ၇ ယောက်မှာ ၁ ယောက်နှုန်းက ဖေ့စ်ဘွတ်ကို သုံးနေကြပြီတဲ့။ သန်းပေါင်း ၁၅ဝဝဝ လောက်ဟာ တလမှာတခါအနည်းဆုံးဖေ့စ်ဘွတ်သုံးနေကြတယ်။ တရက်တည်းမှာ အများဆုံးသုံးကြတာက အခုကြာသပတေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ကုမ္ပဏီကို ဟားဗတ်ကျောင်းသား (မာ့ခ် ဇူကာဘဂ်) ကနေ ၂ဝဝ၄ မှာစပြီးထူထောင်ပါတယ်။
ဒီစာဖတ်နေသူဟာ အဲဒီနေ့က လူပေါင်း သန်းတထောင်ထဲကတယောက်ဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ့်ဖေ့စ်ဘွတ်ကို ကိုယ်ပိုင်တယ်။ အကောင်းဆုံးဆိုတာကို တင်ခဲ့မယ်လို့သိတယ်။
လာမယ့် နိုဝင်္ဘာ (၈) ရက်နေ့မှာ လူကြီးမင်းဟာ မြန်မာပြည်က လူပေါင်း ၃၂ သန်းလောက်ထဲကတယောက်ဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ့်မဲကို ကိုယ်ပိုင်တယ်။ အကျိုးအရှိဆုံး အသုံးချလိမ့်မယ်လို့လည်း တထစ်ချယုံကြည့်ပါတယ်။
- ငုနဲ့ပိတောက် နွေမှာလှိုင်သည်။ စုနဲ့ ခမောက် မေမှာနိုင်မည်။
- ဆောင်းအဝင် ဒေါင်းကြယ်စင်၊ ကောင်းကင်တမွတ် အောင်ပန်းဆွတ်။
• လူပြောသူပြော ဘယ်လိုခံနေရနေရ စစ်အုပ်စုမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ဒီမိုကရေစီဖက်ကဖြစ်ကြ၏။
• လူပြောခံရနေမယ့် မဲပေးရမှာဆိုရင်တော့ အဲလိုပါတီကိုသာပေးရမည်။
• နိုင်ငံရေးမှာ ဝင်လုပ် (ဝင်ရှုတ်) နေနေ ဘုန်းကြီးသည် သံဃာသာဖြစ်၏။
• သင်္ကန်းကပ် အလှူပေးရင်တော့ ကျောင်းရွေးကြရသည်။
• အဝတ်အစားဘယ်လိုပြောင်းထာထား စစ်တပ်ကိုသာအားထားသူများသည် စစ်အုပ်အုပ်စုသာဖြစ်၏။
• လူထုကိုအားမကိုးသူများအား မဲပေးရင်တော့မှားကြမည်။
အခုလေးတင် ဖေ့စ်ဘွတ်မှာတွေ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်အလုပ်ဟာ စိတ်ထားကောင်းမွန်ပါက ကုသိုလ် ၅ မျိုးရနိုင်တယ်တဲ့။ မေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်၊ ကရုဏာဘာဝနာကုသိုလ်၊ မုဒိတာဘာဝနာကုသိုလ်၊ ဥပေက္ခာဘာဝနာကုသိုလ်နဲ့ ဒါနကုသိုလ်။
ဘာသာရေး ရေးထားတာမို့ လူငယ်လူရွယ်တွေက စိတ်ဝင်စားနည်းကြမှာပါ။ ကျွန်တော်လို အရွယ်အိုသူတောင်မှ လုံးစေ့ပတ်စေ့ မဖတ်ဖြစ်ပါ။
အဲလိုစာမျိုး မဖတ်ဖူးလည်း စိတ်ထားကောင်းတဲ့ဆရာဝန်တွေ (နိုင်ငံခြားသားတွေအပါအဝင်) ဒုနဲ့ဒေးရှိပါတယ်။ ဒါလုပ်တာ ကောင်းတယ်လို့ ဆရာတွေက သင်ပေးထားတိုင်းလည်း၊ စာကောင်းပေမွန်တွေကနေဖတ်ထားတိုင်းလည်း ကောင်းတာကို လိုက်နာတဲ့သူက မများလှပါ။
ကောင်း-မကောင်းဖြစ်ဖို့ရာ စာ-ပညာက အခယာတော့ကျပါတယ်။ ဗီဇ-ဝါသနာလည်းလိုတယ်။ ကံတရားလည်းရှိမှ ဖြစ်မယ်။ ပါရမီလည်းထည့်ပြောရတယ်။
ဒါ့ပြင် ကံကောင်းသူနဲ့ကြုံရဆုံရတဲ့ ကံတရားလည်းရှိသေးတယ်။ သမားတော်ဇီဝကဟာ သူကုသပေးတဲ့လူနာမှန်သမျှ အသက်မသေကြဘူးလို့ ပြောစမှတ်ရှိတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဖူးလို့ ထင်တဲ့သူတွေကထင်ကြမယ်။
သူနဲ့ကုသခွင့်ရတဲ့ ကံတရားလိုလာတယ်။ ကံတရားလို့မခေါ်ချင်နေပါ။ ကြုံကြိုက်မှုပေါ့။ ကောင်းတဲ့သူမျိုးနဲ့ ဆုံတွေ့ ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်ရခြင်း အကျိုးပေးမှုဆိုတာ အလွန်မတန်ဆန်းကျယ်တယ်။
၂၇-၈-၂ဝ၁၅ နေ့စွဲနဲ့ထွက်လာတဲ့ သတင်းကတော့ ဟောလိဝုဒ်ရုရှင်မင်းသမီး (ပမ်းမလာ အင်ဒါဆင်) ဟာ သူ့မှာ ကူးစက်ခံထားရတဲ့ အသည်းရောင်စီပိုးကို တလအတွင်းပျောက်အောင်ကုသနိုင်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Baywatch မှာသရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသမီးမှာ အသည်းရောင် စီပိုးရှိနေတာ ၁၆ နှစ်တောင်ရှိပြီ။ ဆေးသစ်နဲု့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရောဂါသိကာစ သူပြောတာက သေဒဏ်ချမှတ်ခံရသလိုခံစားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့အရင်ယောက်ျား Tommy Lee (တော်မီ လီ) နဲ့ ဆေးထိုးအပ်မျှသုံးခဲ့ရာကနေ ကူးစက်တာပါတဲ့။
အသည်းရောင် (စီ) ဟာ တဖြေးဖြေးချင်းသာတိုးတိုးလာတယ်။ အသည်းကိုဖျက်ဆီးတယ်။ အသည်းခြောက် စေနိုင်တယ်။ အသည်းကင်ဆာဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ တယောက်နဲ့တယောက်မှာ အသည်းကို ထိခိုက် ပျက်စီးစေတဲ့နှုန်း မတူကြပါ။
ယူအက်စ်မှာ လူ ၃့၂ သန်းမှာပိုးရှိနေကြတယ်။ ကလေးတွေမှာများတယ်။ တနှစ်ကုန်ရင် စီပိုးကြောင့် သေဆုံးရတာ ၁၅ဝဝဝ ယောက်ရှိတယ်။ စောစောကုသလေ သက်သာရာရလေဖြစ်တယ်။ သွေးကနေတဆင့်ကူးစက်တယ်။
အသည်းရောင်စီပိုးရှိနေသူတွေကို အရင်က ထိုးဆေးအပါအဝင် ဆေးအမျိုးမျိုးနဲ့ကုသခဲ့ရတယ်။ အခုတော့ Harvoni ကို သုံးနေပါပြီ။ ဆေး ၁ လုံးတည်း၊ တနေ့မှ ၁ ခါတည်း၊ ထိုးဆေးမလို၊ Ribavirin လည်းမလိုပါ။
ကုသရေးဆိုင်ရာလေ့လာမှုတွေအရ ၉၆% ကနေ ၉၉% ပျောက်ကင်းတယ်။ ဆေးပေးရချိန် ၁၂ ပါတ်သာကြာတယ်။
ပျောက်တယ်ဆိုတာ (စီ) ပိုးတွေကို စမ်းလို့မတွေ့တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။
အရင်က ဆေးမကုဘူးသေးတဲ့ Hep C genotype 1 လူနာ ၈၆၅ ယောက် (သူတို့ထဲမှာ တချို့က အသည်းခြောက်တာ နောက်ပိုင်းရောက်နေပြီ) ကို လေ့လာမှုတခုလုပ်ခဲ့တယ်။ Harvoni ဆေးကို တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁၂ ပါတ်ပေးပြီးစမ်းတော့ ၂၁၃ ယောက်ထဲက ၂၁ဝ ယောက် (၉၉%) မှာ ပိုးရှာမတွေ့တော့ပါ။ နောက်လေ့လာမှုတခုမှာ ၆၄၇ ယောက်ကို အဲဒီနည်းအတိုင်း ဆေးကုပေးတော့ ၂၁၆ ယောက်ထဲက ၂ဝ၈ ယောက်မှာ ပိုးရှာမတွေ့တော့ပါ။
Harvoni ဆေးထဲမှာ Ledipasvir နဲ့ Sofosbuvir ဆေး ၂ မျိုးကို တခါတည်းရောထည့်ထားတယ်။
၂ဝဝ၁ = Ribavirin တနေ့ ၆ တောင့်အထိ + Peginterferon တပါတ်ထိုးဆေး ၁ လုံး။
၂ဝ၁၁ = Protease inhibitors + Ribavirin တနေ့ ၁၈ လုံးအထိ + Peginterferon တပါတ်ထိုးဆေး ၁ လုံး။
၂ဝ၁၃ = Sofosbuvir တနေ့ ၇ လုံးအထိ + Peginterferon တပါတ်ထိုးဆေး ၁ လုံး။
၂ဝ၁၄ = Harvoni (Ledipasvir/Sofosbuvir) တနေ့ ၁ လုံးတည်းသာ။
ကျွန်တော်က နိုင်ငံရေးမှာ ၁၉၉ဝ ဘက်ရ်ှကမို့ လူဟောင်းစာရင်းဝင်ပါတယ်။ အဟောင်းတိုင်းလဲ မကောင်းပါ၊ အသစ် ဆိုတာထဲမှာလဲ မဖြစ်သင့်တာတွေပါတယ်။ ဆန်ခါတင်စစ်ထားတာကိုမှ ကြာတော့ ဂန္တဝင်မြောက်တယ်လို့ ခေါ်တယ်။
• မိုးလေမမှန်၊ မြစ်ရေမမှန်၊ လူတွေမမှန်၊
• မြန်မာပြည် ဥတုရာသီ ရွေးကောက်ပွဲကိုမှီ။
• မိုးလေ၊ မြစ်ရေ မှန်ပါစေ၊
• လူရှူရတဲ့လေ သန့်ပါစေ၊
• လေရှူရတဲ့လူတွေ သန့်ပါစေ။
• လူညစ်တွေပေါ်မှာ ခဲမိုးရွာပါစေ၊
• လူသစ်တွေပေါ်မှာ မဲမိုးရွာပါစေ၊
• ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဂန္တဝင်မြောက်ပါစေ။
ဆရာ့့ ဦးကျော်ဆန်းက ဝန်ကြီးခရီးစဉ်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ငွေအားတွေနဲ့ စည်းရုံးရေးစနေပြီ။
• ပန်းရွာမှာ ကျောင်းဆောင်အတွက် ငွေလှူသွားတယ်။
• နွယ်ရှောက်မှာ လူရိုက်မှုဖြစ်လို့ လူတွေများနေတာကို သူကိုကြိုတယ်ထင်ပြီး ငွေဆယ်သိန်း လှူသွားတယ်။
• တနယ်မှာတော့ သမဝါယမက ထွန်စက်တွေ ထုတ်ပေးတဲ့အကြောင်းတွေ ပြောတယ်။
• ကျောက်ကုန်းမှာတော့ ကြိုဆိုမှုက ကြက်ဝိုင်းလောက်တောင်မရှိလို့ သူစိတ်ဓါတ်ကျသွားတယ်။
• အောက်လယ်ဓမ္မနားက ၅၅-မိုင်စခန်းမှာ ဘုရားဆင်းတုတော်လေးတွေကို မဲဖောက်ပြီး ပေးသွားသေးတယ်။
Oo Yetun ကိုယ်စွမ်းသလောက်တော့ ကိုယ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်တဲ့။
• ဘောလုံးကစားတာဆိုတော့ လက်နဲ့ထိလို့မရဘူးပေါ့။
• တယောက်တည်းသာ ခြေရောလက်ပါ ထိလို့ရတယ်။
• အသင်းတိုင်းက ခရာမှုတ်တဲ့သူကို ကြောက်ရတယ်။
• ပရိသတ်ကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ အားရရင်လက်ခုပ်တီး။ ဆိုဆဲစရာမှန်သမျှ မြိုသိပ်မထားကြဘူးဗျ။
• နောက်တပွဲလည်းလာအုံးမယ်။ ကွင်းမပြောင်း ဒိုင်မပြောင်းဘူး။
• လက်ရည်သာနေသူကနေ (ဟင်းဒိကက်ပ်) ယူထားတဲ့ပွဲပါပဲ။
Handicapped = သိသာမြင်သာအောင် ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်း အားနည်းချို့ယွင်းနေသူ။
ဥပမာ ဆွံ့အနားမကြားကျောင်း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်။
Handicap = ဂေါက်သီးကစားရာမှာ အားနည်းသူကို ရိုက်ချက်အရေအတွက် အကြောပေးခြင်း။
ဥပမာ စစ်တပ်အတွက် ၂၅% ပေးထားခြင်း။
၁။ ဆရာရှင့် သမီးက ဒုတိယကလေးမွေးထားတာ ၅ လလောက်ရှိပါပြီ။ အခု တင်ပါးနဲ့ပေါင်မှာ ယားပြီး နီနေပါတယ်။ နီနီအကွင်းလေးတွေပါ။ Betacloge cream လိမ်းတယ်ဆရာ ပျောက်သွားရင်ချပ်သွားတယ်။ ရက်နဲနဲကြာရင် ယားပြီး အဖုတွေထွက် နီနီအကွင်းတွေဖြစ်လာပြန်ရောဆရာ။ သူများတွေကတော့ ပွေးလို့ပြောတယ်ဆရာ ဟုတ်ပါသလား။ ကလေးကိုလဲ ကူးမှာကြောက်လို့ပါ။ ဆရာဆေးလေးညွှန်ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
အနားသတ်ရှိရင် ပွေးဖြစ်ပါမယ်။ Grisofulvin တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁ဝ ရက်သောက်နိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်တာစောရင် Ring guard လိမ်းနိုင်တယ်။ ထိစပ်မိသူတွေကို ကူးစေနိုင်တယ်။ အရပ်ဆေးမသင့်ပါ။
ဆရာရေ ဆရာပေးတဲ့ဆေး ၁ဝ ရက်သောက်တာ လုံးဝပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဆရာ။ လိမ်းဆေးကဝယ်မရလို့မလိမ်းရဘူး ဆရာ့ကို တကယ့်ကိုကျေဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ နောက်မသိတာရှိရင်လဲ မေးခွင့်ပြုပါအုံးနော်ဆရာ။ ဆရာ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။
၂။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ဆရာရှင်။ ကလေးလေးက အရမ်းငယ်တော့ ငိုရင် စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ဆရာပြောတဲ့ နည်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ လက်တွေ့ စမ်းသပ် လုပ်ကြည့်ပါမယ်။ ကျေးဇူးတင် ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်။
ဆရာပေးတဲ့ အနွေးဓာတ်ပေးတာ ကလေးလေး အဆင်ပြေနေပါပြီ။ ကျေးဇူးများစွာတင်ပါတယ်။ ဆရာလဲ ကိုယ်စိတ် ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆန္ဒမွန်ပြုပါတယ်။
လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်သူ့ကို၊ ဘယ်ပါတီကို မဲပေးမလဲ။ ဆက်ဖတ်ဖို့ မလိုတဲ့သူက များမှာပါ။ ကျနော်က ဘယ်ပါတီအတွက် မဲဆွယ်မလဲကို သိကြပြီး ဖြစ်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် သည်လိုစာရေးတာ အချိန်အတော် နောက်ကျတာကို သတိထားမိမှာပါ။ “ဦးဘယ်သူ၊ ဒေါ်ဘယ်သူ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဖြစ် အန်အယ်လ်ဒီ ကိုယ်စားလှယ်တွေ အနိုင်ရရှိရေးကို တတ်စွမ်းသရွေ့ လုပ်ပါမယ်” လို့ ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေရော ပါတီကို တရားဝင်စာနဲ့ပါ ရေးခဲ့တာ ၆ လ မကတော့ပါ။
ဒီကြားထဲမှာ ထင်မထားတာတွေ အတော်လေး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အာဏာယူပါတီထဲမှာက တမျိုး၊ အန်အယ်လ်ဒီကိုယ်စားလှယ် ရွေးတာကလည်း ဟိုးလေးတကြော်။ သဘောထားပေးပါလို့ ပြောတာကို စကားလုံး ရွေးနေပါတယ်လို့ ပြန်ဖြေခဲ့ရတယ်။ အဲဒါဟာ ပါတီရွေးဖို့ အချိန်ယူခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။
ဒေါ်စုကတော့ “ပါတီအမှတ်တံဆိပ်ကိုသာ ကြည့် မဲပေးပါ” လို့ ပြောထားတယ်။ ပါတီဥက္ကဋ္ဌက ပြောထားပြီးမှ ဘာထပ်ရေးစရာလိုသလဲမေးရင် ကျနော်က ဒေါ်စုမဟုတ်ပါ။ ပြောချင်တာက အဲဒါသာမကပါ။ အငြင်းပွားစရာတွေ များနေတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီကိုသာ မယိမ်းမယိုင် ကျောက်စာတိုင်လို မဲပေးပါလို့ ပြောတာအပြင် “ဘာလို့ တခြားပါတီကို မဲမပေးသင့်သလဲ” ကိုပါ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။
ဥပမာတခု တင်ပြပါရစေ။ ပုလဲမှာ အရွေးခံမယ့် အန်အယ်လ်ဒီက ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ၁၉၉ဝ ကတည်းက ကျနော်နဲ့ လက်တွဲလုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ သူက ပုလဲသူ မဟုတ်ပါ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးဝန်ကြီး ပုလဲနယ်သား ဦးကျော်ဆန်းကတော့ ကျနော်နဲ့ အမျိုးမကင်းပါ။ ဒါပေမယ့် သူနဲ့ ကျနော်က နိုင်ငံရေးမှာ အဖြူနဲ့ အမည်း မတူ ကွဲပါတယ်။ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်ကို မြို့နယ်အဆင့် ပါတီထဲမှာ ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း ထောက်ခံမှုမရတာလဲ သိပါတယ်။ သူ့အစား တခြားပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်နေလည်း ရာနှုန်းပြည့်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ၁၉၉ဝ တုန်းက ရွာ ၃ ရွာမှာ ရှုံးခဲ့ပါတယ်။
“၂ဝ၁ဝ တုန်းက အန်အယ်လ်ဒီ ဝင်မပြိုင်လို့သာ ဦးကျော်ဆန်းရတယ်တဲ့” ပြောတာကို ငြင်းနိုင်ရင် ငြင်းပါ။ ၂ဝ၁၂ မှာ ဦးကျော်ဆန်းရဲ့အမျိုးကို မဲမပေးကြတော့ဘဲ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်ကိုသာ မဲပေးခဲ့တာကိုကြည့်ရင် မဲပေးသူတွေက ပြည်ခိုင်မဖြိုးကြတော့တာ သေချာတယ်။ ပုလဲက နမူနာပါ။ တခြားနေရာတွေလည်း အတူပါ။
အန်အယ်လ်ဒီ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ဆောင်ပုဒ် “ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်တန်ပြီ” ပေါ်လာတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက ၂ဝဝ၈ ရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းမှာ အောင်အောင်မြင်မြင် အသုံးချခဲ့တဲ့ “ချိန်း” နဲ့ တူပါတယ်။ အိုဘားမားက အပြောင်းအလဲဆိုတာ တချိန်ချိန်ကို ဖြစ်ဖြစ် တယောက်ယောက်ကို ဖြစ်ဖြစ် စောင့်နေလို့တော့ မရဖူး၊ အခု ကျနော်တို့ အရယူရမယ်လို့ ဆက်ပြောပါတယ်။ အိုဘားမား ပိုစတာ “မျှော်လင့်ချက်” ဆိုတာ အတော်အောင်မြင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ကနေ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် မျှော်လင့်ချက်ဟာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ အသစ်ကို မျှော်တာပါ။ အာဏာသိမ်းတဲ့ အကျင့်ပါနေတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဟာ ရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းအဖြစ် အချင်းချင်း စစ်ခင်းပြလိုက်တယ် မဟုတ်ပါလား။ အာဏာသိမ်းတာက မျှော်လင့်ချက် မဟုတ်ပါ။ စစ်ခင်းခြင်းဟာ မျှော်လင့်စရာ မဟုတ်ပါ။
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် အရွေးခံမယ့်သူမှာ သနားစရာ တစုံတခု ဖြစ်လို့ စာနာစိတ်နဲ့ ပေးကြတာကို စာနာမှုမဲလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်မှာ ၂ဝ၁၄ တုန်းက သမ္မတရွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီက သမ္မတလောင်း ဒွါဒို ကမ်ပို့စ် လေယာဉ် ပျက်ကျပြီး သေဆုံးသွားတဲ့အခါ သူ့တွဲဘက်ဒု-သမ္မတလောင်း မာရီယာ ဆဲလ်ဗားဟာ ထိပ်ဆုံးကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ဦအောင်သောင်း ကွယ်လွန်သွားတာမို့ သူ့နယ်မှာ လာအရွေးခံမယ့် နောက်လူက စာနာမှုမဲတချို့ ရစရာအကြောင်းတော့ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလိုမဲတွေဟာ နိုင်ငံရေး မဆန်ပါ။ ထမင်းစားချိန်မှာ ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်ကို ထမင်းကျွေးသလိုသာ ဖြစ်တယ်။ ကျနော်က ထမင်းရှင်နဲ့ ဧည့်သည် ခွဲခြားနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးကို ရောက်စေချင်ပါပြီ။
အမတ်တယောက်ကို မဲပေးသူအရေအတွက် အတော်မတူပါ။ ၁၉၉ဝ တုန်းက လူဦးရေ ၁ သိန်းအောက်မှာ အမတ် ၁ ယောက် သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ အခု တမျိုး ဖြစ်တယ်။ မဲဆန္ဒနယ် သေးသေးလေးကနေ အရွေးခံရသူလည်း အမတ်ပဲ။ ဥပမာ ကယားပြည်နယ်ကို ကြည့်ပါ။ မြို့နယ်ပေါင်း ၇ ခုသာ ရှိတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော် အမတ်အရေအတွက် ၁၁ ယောက်ရတယ်။ နောက်ပြီး အမတ်ရယ်လို့ ဖြစ်လာတာနဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး သြဇာအာဏာကြီးတဲ့ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူ့ကို မဲပေးလိုက်သူ အရေအတွက်ဟာ ထောင်ဂဏန်း သေးသေးလေးသာ ရှိတယ်။
မြင်သာအောင် ပြောပါရစေ။ သူကြီးတယောက်ကို တူမီးသေနတ်တလက်ပေးရင် သူ့ရွာမှာ မီးသေတယ်။ စွာတဲ့သူကြီးဆို ပွိုင့်တူတူးတလက်ပေးရင် ရေရော မီးရော သေတယ်။ ကျနော်က လူသတ်လက်နက်ခေတ်ကနေ အခု ပြောင်းလာတဲ့ တောပစ်သေနတ်ခေတ်ကိုပါ အဆုံးသတ်ချင်တယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြော်ငြာနည်း ၂ မျိုး ရှိတယ်။ တမျိုးက ကိုယ့်ပါတီအတွက် ကြော်ငြာကြတယ်။ နောက်တမျိုးက ပြိုင်ဘက်ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ ကြော်ငြာဖြစ်တယ်။ ၁၉၉ဝ တုန်းက ကျနော့်ပုလဲမှာ ပြိုင်ဘက် တစည ပါတီကနေ ညအချိန် လူခြေတိတ်မှာ ကျနော့်ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ ကက်ဆက်တိပ်ခွေတွေ အသံချဲ့စက်နဲ့ ဖွင့်တယ်။ ကျနော်က မြို့နယ်ဆရာဝန်လုပ်ရာကနေ နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်လို့ အလုပ်က ထွက်ထားတာမို့ ကျနော့်ဆေးရုံမှာ ဆေးဆိုလို့ ပတ္တီးနဲ့ ဂွမ်းပဲရှိတယ်လို့ ပြောဟောတယ်။ အမှန်က မဆလခေတ်မှာ ဆေးရုံတိုင်းမှာ အရှားဆုံးက အရက်ပျံ၊ ပတ္တီးနဲ့ ဂွမ်းဖြစ်တယ်။
မဲဟာ ဘယ်နည်းနဲ့ ရလာလာ ရေတွက်ခံရတယ်။ မဲရုံမှူးတွေက ခိုးတဲ့မဲလည်း ရေမှာပဲ။ ၂ဝ၁ဝ တုန်းက ကြိုတင်မဲဆိုတာကို ရေတွက်ခဲ့တဲ့ နမူနာကတော့ ကမ္ဘာသိ ဟိုးလေးတကြော် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို အီးယူ ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ထိုးလိုက်တာကိုကြည့်ရင် မဲပေးတဲ့နေ့မှာတော့ ညစ်စရာ သိသိသာသာ ရှိမှာ မဟုတ်တော့ပါ။ ဒါဖြင့် ဘာလို့လဲ။ အနိုင်အရှုံးစာရင်း ထွက်အပြီးမှာ သမ္မတ ဖြစ်ဖို့နဲ့ အစိုးရ ဖွဲ့နိုင်ရေးအတွက် အကွက်ချထားပြီးဖြစ်လို့ ရုံဖွင့်လိုက်တာပါပဲ။
ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ ၁ လ၊ ၂ လ အလိုအထိ ဘယ်သူ့ကို မဲပေးရမှန်း မသိသေးသူတွေက မနည်းလှပါ။ အဲဒါမျိုးက နိုင်ငံတိုင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် မချရသေးတဲ့သူတွေဟာ မဲရုံဖွင့်တဲ့နေ့အထိ ရှိတယ်။ တချို့လည်း မဲပုံးရှေ့ရောက်တဲ့အထိ။ များသောအားဖြင့် သူတို့ဟာ နိုင်ငံရေးထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မပါကြသူတွေ ဖြစ်တယ်။ တချို့ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဟိုလိုလို သည်လိုလို လူတွေရဲ့မဲက အဆုံးအဖြတ်ကျတတ်တယ်။ သူတို့ဟာ အရေးပါလို့ ရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်း လုပ်သူတွေက အလေးထားရတယ်။ နောက်အယူအဆတခုကတော့ အဲလို ကိုယ့်အကြိုက်ကို မရွေးနိုင်သူတွေကို လူပြိန်းတွေလို့ ခေါ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ တခြားဂြိုဟ်ကနေ လာကြသူတွေ မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကတော့ တလံအကွာလောက်သာ ကြည့်ကြလိမ့်မယ်။ အရှည်ကြည့်တဲ့ကာလ ရောက်စေချင်ပါတယ်။
မထင်မှတ်တဲ့ဘက်ကို မဲပေးသူတွေကို ယိမ်းယိုင်မဲလို့ ခေါ်တယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂ ခုစနစ်ရှိတဲ့ အမေရိကမှာ သိသာတယ်။ သူတို့ကြောင့် အနိုင်အရှုံးရလဒ်ကို ပြောင်းစေနိုင်တယ်။ အမေရိကန်သမ္မတ ရီပတ်ဘလီကင်ပါတီက ရီဂင်ကို မဲပေးခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် အမတ်တွေကို (ရီဂင် ဒီမိုကရက်) လို့ခေါ်တယ်။ ဒီမိုကရက်သမ္မတ ကလင်တန်ကို မဲပေးတဲ့ ရီပတ်ဘလီကင် အမတ်တွေကို (ကရင်တန် ကွန်ဆာဗေးတစ်) လို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒီနမူနာတွေက အမတ်တွေကြားမှာ ဖြစ်တယ်။
မဲပေးသူတွေကြားမှာလည်း အဲလို ဖြစ်နိုင်တယ်။ မြန်မာပြည်က ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာ အဓိကပါတီကြီး ၂ ခုထဲမှာ ဝေဖန်ထောက်ပြစရာတွေ ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်ထားလို့ ပါတီထောက်ခံသူတွေထဲကနေ ယိမ်းယိုင်စရာအကြောင်းတွေ ရှိစေပါမယ်။ အန်အယ်လ်ဒီထဲကနေ ထွက်သူတွေ၊ ထုတ်ခံရသူတွေ၊ အခဲမကျေသူတွေ ရှိသွားစေခဲ့တယ်။ လက်စားချေမဲတွေ ပေးကောင်းပေးကြမယ်။ အရေအတွက်တော့ များရာအကြောင်း မရှိပါ။ ပုလဲကိုပဲ ဥပမာထပ်ပေးပါရစေ။ အန်အယ်လ်ဒီကနေ ကိုယ်စားလှယ် အရွေးခံဖို့ လျှောက်လွှာတင်ခဲ့သူ ၃ ယောက်ဟာ ပါတီကနေ အရွေးမခံရတော့ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီက ကောက်စားတာကို ခံလိုက်ကြတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ ဘယ်ပါတီကမှ အပြတ်အသတ် မနိုင်တဲ့အခါ ပါတီသေးလေးတွေက (ကင်းမိတ်ကာ) ဆိုပြီး နောက်တက်မယ့်အစိုးရဟာ သူတို့ကနေသာ ရွေးပေးသလို ဖြစ်စေတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်မျိုး ၂ဝ၁၅ အပြီးမှာ ဖြစ်စရာမရှိပါ။ ဒါကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးတုန်းက ပုဒ်မ ၁ဝ၉ (ခ) နဲ့ ၁၄၁ (ခ) တို့ကို တချက်လွှတ်အမိန့်နဲ့ ပြင်လို့မရခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက စစ်မဲနဲ့ ပေါင်းတာတောင် မဲအရေအတွက် နည်းနည်းလိုနေရင် ကြေးများများမတောင်းဘဲ လာပေါင်းကြမယ့်ပါတီတွေ ရှိမယ်။ အဲဒါကို အပေါစား ကြေးစားနိုင်ငံရေးလို့ ခေါ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တာ ဖြစ်နေပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ကောက်ရိုးမီးနဲ့ တူတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ ပြောကြတယ်။ အဲဒီသုံးသပ်ချက်က အခုထိမှန်တယ်။ ဝုန်းကနဲ ထလောင်တယ်။ ရှဲကနဲ ငြိမ်းသွားတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနီးမှ လမ်းပြင်ပေးနည်း၊ ဒန်ပေါက်ကျွေးနည်း၊ မီးရအောင်လုပ်ပေးနည်းတွေဟာ မရိုးနိုင်တဲ့ လက်သုံးရွေးကောက်ပွဲနည်းနာတွေ ဖြစ်နေဆဲပဲ။ အဲဒီနည်းတွေကို လက်ရှိသမားတွေက နှစ်ပန်းသုံးပန်းသာတယ်။ ကောက်ရိုးကို မီးတင်ရှို့ကြလိမ့်မယ်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးဟာ သန်းခေါင်ယံမှာ ထက်ခြမ်းကွဲတာကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့လိုက်ကြရတယ်။ သူတို့က ကံကောင်းတယ် ပြောရမယ်။ သူတို့ထဲကနေ အန်အယ်လ်ဒီဘက်ကို မဲစင်ထွက်လာစရာ မရှိပါ။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်က (ဖဆပလ) ၂ ခြမ်း ကွဲတာကို သတိရမိတယ်။ အဲသည်တုန်းက စစ်တပ်က ထောက်ခံတဲ့ပါတီဟာ မရှုမလှ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၈ တုန်းက ချီလီမှာ အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (သြဂတ်စတို ပီနိုချေး) ဟာ သူ့ကို အတိုက်အခံပြုသူတွေကို ဖမ်းဆီး ထောင်ချ သတ်ပစ်နေခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်မယ်လို့ ကြေညာလိုက်တယ်။ အောက်တိုဘာ ၅ ရက် မတိုင်ခင်မှာ အတိုက်အခံတွေကို တီဗွီကနေ နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ်စီ ပြောခွင့်ပေးတယ်။ ချီလီ ခရစ်ယာန် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ဆန်းသစ်တဲ့ မဲဆွယ်နည်းကို တီထွင်ပြီး အသုံးပြုလိုက်တယ်။ (ပီနိုချေး) ကို ပြင်းထန်မာကျောတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်မယ့်အစား ကြည့်ရှုနားဆင်သူတွေကို ပျော်မြူးစေမယ့် နည်းလမ်းကို သုံးလိုက်တယ်။ ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ မဲပေးသူပေါင်း ၇ ဒသမ ၂ သန်းထဲက ၃ ဒသမ ၉၆ သန်းကနေ ပီနိုချေးကို ဆန့်ကျင်မဲပေးခဲ့လို့ ၁၉၇၃ ကတည်းက အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်ကြီးဟာ ၁၉၉ဝ မှာ ဆင်းပေးရတော့တယ်။
– အနုပညာရှင်တွေကို အားကိုးပါရစေ။
– (ဖဆပလ) အကွဲမှာ စစ်တပ်ကနေ တဖက်သတ်ထောက်ခံပြီး ရှုံးခဲ့တဲ့ပါတီဟာ (တည်မြဲ) ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ယူခဲ့တယ်။ အခုကော ဘယ်လောက်ခိုင်ဖြိုးသလဲ မြင်ကြရပါတော့မယ်။
– အပြောင်းအလဲလိုချင်ရင်တော့ အဝတ်အစားနဲ့ နာမည်သာပြောင်းပြီး အာဏာ ဆက်ယူနေတဲ့ ပါတီကို မဲမပေးပါနဲ့။
– တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလည်း ဒေသခံလူမျိုးချင်း အတူတူဆိုရင် အန်အယ်လ်ဒီ ကိုယ်စားလှယ်ကိုသာ မဲပေးကြပါ။
– ပါတီအလံတွေ၊ တံဆိပ်တွေကိုကျော်ပြီး အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကိုသာ မျှော်ပြီး မဲပေးပါခင်ဗျား။
မင်္ဂလာပါဆရာ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း အတူတူမနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့သုက်က အဖြူမထွက်ပဲ နည်းနည်း အဝါရောင်သန်းပြီး ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး အကြံဥာဏ်ပေးပါဦးဆရာ။ မိန်းမကို ဆေးစစ်ကြည့်တော့ B ပိုး၊ C ပိုး၊ AIDS တခုမှမရှိပါဖူး။ အခု သုက်ကအဝါရောင်ညစ်ညစ်ထွက်တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
သုက်ရည်အရောင်ဝါရောင် (လိမ်မော်ရောင်) ဖြစ်နေတာဆိုရင် အထဲမှာ ဘီလီရူဘင်ခေါ် အသားဝါရောဂါရှိနေသလား၊ သွေးနည်းနည်းပါနေသလား၊ ဆီးနဲ့ရောနေသလား စစ်ရမယ်။ အစားအသောက်နဲ့ အသက်အပေါ်မှာလည်း မူတည်တယ်။
ပုံမှန်ဆိုရင် အဖြူရောင်နဲ့ မီးခိုးရောင်ဖြစ်တယ်။ နောက်နေတယ်။ နည်းနည်းလေးတော့ဝါနိုင်တယ်။ တခါတလေမှာ အရောင်ပြောင်းတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။
အသီးတွေ၊ ဆနွင်းမှုံ့တွေဖြစ်တယ်။ ကော်ဖီ၊ အသားတွေကနေ သုက်ရည်ကို အခါးဓါတ်ပိုစေမယ်။
အရောင်စိမ်းနေရင် ဆီးကျိတ်ရောင်နေလို့ဖြစ်မယ်။ သိပ်ပျစ်နေတာဆိုရင် ဟော်မုန်းနည်းနေနေလို့။
ဆီးအိမ်နဲ့ ဆီးထွက်လမ်းကြောင်း၊ အသည်း၊ သည်းခြေအိတ်နဲ့ ဆီးကျိတ်တွေကို စစ်ဆေးသင့်တယ်။
Khin Lay ဆရာရေ ၈၈ မှာတောခိုလာတဲ့လူတွေအများစုက နိုင်ငံပြင်ပကိုရောက်လာရင် ဘာဖြစ်လို့ သဘောထားတွေ ပြောင်းကုန်တာလဲမသိဘူးဆရာ။ တကယ်ဆိုရင် သူတို့လဲအာဏာရှင်ကိုဖြုတ်ချဖို့က လိုရင်းဆိုရင် သူတို့တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးနဲ့ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကဘာဆိုလိုလဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်အောင်ပဲဆရာရေ။
Tun Thein ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ဟီးရိုးလုပ်ချင်တာ၊ အများနဲ့မတူပဲဆန့်ကျင်ခဲ့ရင် ထင်ပေါ်မယ်ထင်တာလို့ပဲ မြင်ပါတယ်ဆရာ။
အတော်မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းပါ။ မေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်က ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုသဘောလုပ်ပြီးမှ ထွက်လာမျိုး။ ကာလအပိုင်းအခြား အနည်းဆုံးနှစ်ခုကို ကြည့်ရတာမျိုး။
စာတမ်းလိုမရေးချင်ပါ။ လူနာမည် အသင်းအပင်းနာမည်တွေလည်း မတပ်လိုပါ။ ကျွန်တော်တို့က ဝါအရပြောရင် အကြီးဆုံးလည်းမဟုတ်ပါ။ ကျောင်းသားတွေနောက်မှရောက်တဲ့ (နောက်ရောက်တဲ့သူ နောက်ကတန်းစီရတဲ့) ခေတ်က ၁၉၉ဝ အုပ်စုကဖြစ်ပါတယ်။ ဒိနောက်မှရောက်လာတဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိသေးတယ်။ ၁၉၉၆ အုပ်စု၊ ၂ဝဝ၇ အုပ်စု၊ စသဖြင့် ရှိသေးတယ်။
ပြည်ပနိုင်ငံရေးသက်တမ်း အကြမ်းအားဖြင့် ၂၅ နှစ်ဆိုပါစို့။ ဒီကာလထဲမှာ အာဏာယူထားသူက အပြောင်းအလဲမရှိသေးပဲ၊ အင်စတီကျူးရှင်းခေါ်တဲ့ တည်ဆောက်မှုပုံစံတော့ တမျိုးပြောင်းလာတယ်။ ပြည်ပထွက်ကြသူတွေထဲမှာတော့ အမျိုးမျိုး ပြောင်းခဲ့ကြပါပြီ။ အင်စတီကျူးရှင်းလည်းမရှိတော့ပါ။
အရေအတွက်အများဆုံးကတော့ နိုင်ငံရေးအမည်ခံလိုက် မခံလိုက်အုပ်စုဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီအရေးဓါတ်ပုံထဲမှာတော့ ရှေ့ဆုံးတန်းကသူတွေရှိတယ်။ ဘာသာရေးခေါင်းစဉ်အောက်ရောက်ရင် နိုင်ငံရေးကိုခါးခါးသီးသီးရန်တွေ့ပြီး၊ နိုင်ငံရေးမှာ နေရာပေးရင် ထိပ်ဆုံးကရချင်သူတွေရှိတယ်။
နိုင်ငံရေးအုပ်စုထဲမှာလည်းအမျိုးမျိုး။ အခြေခံအသက်မွေးမှုမတူတာ၊ ပညာရေးနဲ့ လေ့လာမှု မတူတာ၊ ရည်ရွယ်ရင်း မတူတာ၊ အခြေအနေကို သုံးသပ်မှုမတူတာတွေရှိကြတယ်။ ဟီးရိုး လုပ်ချင်သူဆိုတာ တကယ်ပါတယ်။ နေရာတကာပါ။ ဒုတိယမှတ်ချက်လို အာဏာရှင်ကို အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ဆန့်ကျင်ပြတဲ့သူတချို့ထဲမှာ အာဏာရှင်ကအရေးမလုပ်တော့ ဘေးကလူတွေကို လိုက်တုတ်သူတွေပါတယ်။
ထောင်ကျခံရသူတွေထဲမှာ တချို့က ထောင်ချခံရတာကို ဆုတံဆိပ်လိုသဘောထားကြသူတွေရှိတယ်။ ပြည်ပထွက်ကြသူတွေထဲမှာလည်း တချို့က သူတို့ကိုယ်သူတို့ တက္ကသီလာမှာ အဋ္ဌာရသပညာတွေ သင်ပြီးပြန်လာသလို အထင်ရောက်ကြတယ်။ အကုန်မဟုတ်ပါ။ တလှေလုံးတော့ မပုပ်ပါ။
ပိုနေမြဲကျားနေမြဲတွေထဲလည်း အမျိုးမျိုးကွဲတယ်။ အတွေ့အကြုံများလာတော့ ငယ်ရွယ်သူတွေ (ကျောင်းသားအုပ်စု) ထဲမှာ တိုးတက်လာသိမြင်လာကြသူတွေရှိတယ်။ မငယ်သူတွေထဲမှာ ကြီးမိုက်ဆိုတာ တကယ်ရှိတယ်။ ဗီဇ (ဥာဉ်) ကို မပြင်နိုင်ကြပါ။ နှုတ်အာကြမ်းတဲ့သူတွေက အသက်ဘယ်လောက်ရရ ကြမ်းနေကြတာပဲ။ တချို့ကလည်း နေရာတကာမှာ ဗိုလ်သာလုပ်ချင်ကြတယ်။
ပေါင်းကြည့်မှသိရတာတွေ မနည်းပါ။ ဓါးဆိုတိုင်း သွေးလို့မထက်ပါ။ တချို့ကတော့ဗျာ (ကန်တော့ပါ) ဘုန်းကြီးလူထွက်နဲ့ နှိုင်းလို့ရတယ်။
- ဆေးဝါးကအစ ဘာပစ္စည်းဝယ်ဝယ် ဘယ်နှစ်နှစ်အာမခံဆိုတာရှိတယ်။
- ဒေလီမှာနေတုံးက နွေရာသီမှာ ဝါတာကူလာဆိုတာ အိမ်တိုင်းမှာမရှိမဖြစ်သုံးကြရတယ်။ နောက်တနှစ်ဆို ပြင်ရမယ်။ ရောင်းတာကလည်း တရာသီသာအာမခံတယ်။
- မြန်မာပြည်မှာ ဥတုသုံးပါးခံဆိုတာ ပေါ်ကာစက နတ်သမီးတံဆိပ်နဲ့ ယမ်းမီးခြစ်။
- အခု ငါးနှစ်အာမခံဆိုတာ ရှာနေကြပြီ။ ယမ်းမပါတဲ့ မီးခြစ်ပဲလိုချင်တယ်။
- မင်္ဂလာပါလို့မပြောဖူး မရေးဖူးပါ။ ကောင်းသောမနက်ခင်းပါလို့လည်း မသုံးပါ။
- ဆောရီးလို့တော့ ပြောလည်းသလို ရေးလည်းရေးနေတယ်။ သိုင်းကျူးလို့တော့ ဗိုလ်လိုပြောပေမယ့် ဗမာလိုမရေးပါ။
- အိပ်မက်ချိုချိုလို့တော့ တခါမှဘာသာမပြန်ဖူးပါ။ (ဆွိ ဒရင်းမ်) လို့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ရေးပါတယ်။
- ရင်းနှီးတဲ့သူကနေ အဲလိုရေးလာရင် မနက်ရောက်တော့ ဆီးချိုစစ်ပါလို့ပြန်ရေးတယ်။
- မနေ့ညက ဆေးခန်းမှာလာကူခဲ့တဲ့ဆရာမတယောက်ကနေ အဲလိုရေးတာဖြစ်လို့ (အင်စူလင် ဒရင်းမ်) လို့ရေးလိုက်တယ်။ (အင်စူလင်) ဆိုတာ ဆီးချိုအတွက် ထိုးဆေး။
- မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ နှုတ်လည်းချိုကြပါစေ၊ ဆီးချိုဘေးကဝေးကြပါစေ။
အခုပဲ အထဲကလူရွယ်တယောက်နဲ့ စကားစမြီပြောဖြစ်တယ်။ အနုတ်သဘောဆောင်တာတွေကိုရေးပြပြီး ဒါပေမဲ့ လှုပ်ရှားမှု့တော်တော်များများမှာ လူငယ်တွေပါဝင်လာတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ကွန်ယက်အကျိုးကျေးဇူးများလာတယ်။ အရာတိုင်းကို အရင်လိုလက်မခံကြဘူး။ တွေးလာကြပြီ။ စာလည်းပြန်ဖတ်လာကြတယ်။ ကျမတို့တိုင်းပြည်က သဘောင်္ကြီးနစ်တာ ဆန်ဆေးတောင်းနဲ့ဆယ်ရသလိုဖြစ်နေတော့၊ အားမှန်သမျှစုနေရမှာ။ စုန်းပြူးတွေနဲ့ ထိပ်ချလို့ ဓားပြမှန်းမသိသူတွေကလွဲရင် NLD ကိုမဲပေးမယ်။ ထုတ်/ထွက်တွေကို ကောက်စားလည်း အားအများကြီး ပါမသွားရင်တော်ပါပြီ။ ပြန်တိုက်တိုင်းလဲမရ၊ မိုက်တိုင်းလဲ ထောင်နန်းကြွရတဲ့ ဒီအာဏာရှင်အစိုးရ ကျဆုံးပွဲက ဖဲ့ချွေနည်းနဲ့ပဲ တိုးဝင်နေရသလို ဖြစ်နေပြီ။ ဆရာရေ့့ ကျမလဲ နိုင်ငံမခြားတဲ့ နိုင်ငံခြားမှာနေတယ်။ တရုတ်ပြည်ရဲ့ မန္တလေး။
ဆရာ စာတပုဒ်ရေးပြီးပြီ။ ပို့ထားတယ်။ မကြာခင် တင်မယ်။
- အနုပညာသည်တွေ စာပေပညာရှင်တွေရဲ့အစွမ်းကို လျှမ်းလျှမ်းတောက်စေချင်နေတယ်။
- အရွေးမခံကြသူတွေရဲ့ အတ္တနည်းပါးမှုနဲ့ ပရဟိတစိတ်ကို ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်။
- လူငယ်လူရွယ်တွေ ဉာဏ်နဲ့မာန်ကို သိချင်တယ်။
Hayman Nyinyi ဆရာအချိန်ရရင်ဖြေပေးပါဦးနော်။ အခုမြန်မာပြည်မှာ ဆရာဝန်အထူးကုတွေနဲ့ ဆရာဝန်ငယ်တွေကြားမှာ လူနာတွေ မြေစာပင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးက ဒီဆေးသောက်ပြီးရင် တသက်လုံးသောက်ပေါ့။ ဥပမာပြောရရင် သွေးတိုးလူနာပေါ့ဆရာ။ ငယ်တဲ့ဆရာဝန်ကြတော့ ၇ နှစ် ၈ နှစ်စွဲသောက်တာမကောင်းဘူး။ တခြားဆေးဖက်ဝင်အပင်က ထုတ်တဲ့ herbal အမျိုးအစားနဲ့အစားထိုးပေါ့ဆရာ။ လူနာမှာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူးပေါ့ဆရာ။ ဆရာ့အနေနဲ့ ဒါကို ဘယ်လိုမြင်ပါလဲ။ တကယ်ဖြစ်သင့်တာက ဘယ်လိုပုံစံလဲ။ ဆရာဝန်အထူးကုတွေက ဒီမှာ ၁ နာရီအတွင်း ရှိသမျှ လူနာ အကုန်ကြည့်တော့ လူနာပြောတာနားထောင်ဖို့ အချိန်မရဘူးဆရာ။ ဆရာဝန်ကြီးအားလုံးကိုမဆိုလိုပေမယ့် အများစုကတော့ဖြစ်နေတယ်။ နှလုံးဆရာဝန်က သူ့ရောဂါကုဖို့ပဲ။ လူနာကဆီးချိုလဲဖြစ်နေတယ်။ ဆီးချိုဆေး သူမကြည့်တော့ဘူး။ လူနာမှဆေးတွေများပြီး ဆေးတထုပ်နဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူးဖြစ်ကြတယ်။ ဆရာ့အမြင် ဆေးကုသမှုတွေ ဘယ်လိုလုပ်ဖို့လိုလဲ။ လူနာအတွက် ဒုက္ခမဖြစ်ဖို့ ကျင့်ဝတ်တွေလိုက်နာဖို့လိုနေပြီလား။ လူနာကို အချိန်ပေးမှုအားနည်းတာက ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေလဲဆရာ။ လူနာနဲ့ဆရာဝန်ဆက်ဆံရေးအားကောင်းဖို့ နှစ်ဖက်လုံးက ဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါဦးနော်ဆရာ။
ဟုတ်။ အထူးကုဆရာဝန်တွနဲ့ ငယ်တဲ့ဆရာဝန်တွေကြားမှာ မငယ်တဲ့ရိုးရိုးဆရာဝန် ကျွန်တော်ပါ ဝင်ပြောရင်တော့ ပိုပြီး ရှုတ်ထွေးတော့မယ်ထင်တယ်။ ပြောရမှာပါပဲ။ (က) အခြေခံအချက်ကတော့ တသမတ်တည်းယူဆတာ မှားတတ်တယ်။ တသက်လုံးသောက်ပါ၊ စွဲမသောက်နဲ့ဆိုတာ နှစ်ခုလုံးက အစွန်းမလွတ်ပါ။
မေးခွန်းထဲက ဥပမာကောင်းပါတယ်။ သွေးတိုး၊ ဆီးချိုစတဲ့ရောဂါတွေဟာ အရှင်းပျောက်စေတဲ့ဆေး မရှိသေးပါ။ အဲတာကြောင့် တသက်လုံးလိုတယ်လို့ပြောရတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တိကျအောင်ပြောပါရစေ။
သွေးတိုးကိုကုသနည်းမှာ ဆေးပေးနည်းတခုတည်းမဟုတ်ပါ။ ဆေးကိုပဲပြောကြရင် သွေးတိုးကျဆေး အမျိုးအစားတွေက များတယ်။ ဆီးသွားစေတဲ့ဆေးအုပ်စု၊ (ဘီတာ-ဘလော့ကား) အုပ်စု၊ (အေစီအီး-အင်ဟဘစ်တာ) အုပ်စု၊ (အေအာရ်ဘီ) အုပ်စု၊ (စီစီဘီ) အုပ်စု၊ (အာလ်ဖါ-ဘလော့ကား) အုပ်စု။ များသောအားဖြင့် သွေးကျဆေး တမျိုးမက ရောပေးပါတယ်။ နှလုံးမကောင်းရင်၊ ကျောက်ကပ်မကောင်းရင်၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနေရင် ဆေးအတွဲတမျိုး။ နှလုံးခုန်မြန်နေသူများနေသူတွေကို တမျိုး။ ကိုယ်ရောင်နေရင် တမျိုး။ ကိုယ်ဝန် သွေးဆိပ်တက်ရောဂါဖြစ်နေရင်တမျိုး။ သွေးတိုးများလွန်းနေရင်တမျိုး။ အရေးပေါ်အခြေအနေမှာတမျိုး။
လူနာတဦးကို ဒီဆေးတသက်လုံးသာသောက်တော့လို့ မပြောတာ မမှန်ပါ။ BP သွေးဖိအားဆိုတာ မိနစ်တိုင်း တက်လိုက် ကျလိုက်ရှိတယ်။ အဲတာကြောင့် ဆေးအတိုးအလျှော့လိုတယ်။ ဆေးတွေမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်။ အဲတာတွေကို ခံစားကြရတာ တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါ။ ဒီဆေးကိုခံနိုင်ရည်မရှိဖြစ်လာရင် နောက်ဆေးကို ပြောင်းပေးရတယ်။ တယောက်တည်းမှာလည်း တသမတ်တည်းမဟုတ်ပြန်ပါ။ ပဌမဆေးနဲ့ သွေးတိုးက ထင်သလောက် မကျရင် နောက်ဆေးပြောင်းရမယ်။ တတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထအကြိမ် စသဖြင့် ပြောင်းရတာလည်းရှိနိုင်တယ်။
သွေးဖိအားလိုပဲ သွေးထဲကသကြားဓါတ်ဟာ ပြောင်းနေတယ်။ အစားအသောက်တခုဝင်တာနဲ့ တက်မယ်။ အစားအသောက်မှားတာနဲ့ အများကြီးတက်မယ်။ အဲတော့ ဆေးကို အတိုး-အလျှော့လုပ်ရမယ်။ ဆီးချိုမှာတော့ ဆေးပြောင်းပေးရတာ နည်းတယ်။ ဒါတောင်မှ Metformin ကိုအများဆုံးသုံးပေမယ့် တခြားဆေးတွေလည်းရှိသေးတယ်။ Biguanides ဆေးအုပ်စု၊ Sulfonylureas ဆေးအုပ်စု၊ Thiazolidinediones ဆေးအုပ်စု၊ DPP-4 Inhibitors ဆေးအုပ်စု၊ Alpha-glucosidase Inhibitors ဆေးအုပ်စု၊ Bile Acid Sequestrants ဆေးအုပ်စု၊ Combination Pills ဆေးအတွဲများ။
မေးခွန်းထဲက စွဲမသောက်သင့်ဖူးဆိုဟာ တိတိကျကျပြောရရင် (စတီရွိုက်) ခေါ် (ကော်တီဇုန်း) ပါတဲ့ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။ ထိုးဆေး၊ စားဆေး၊ လိမ်းဆေးတွေရှိတယ်။ သုံးတဲ့နေရာ ရောဂါတွေကလည်း အလွန်များတယ်။ တာရှည်သုံးရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ အတော်ဆိုးတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ တလှေကြီးရှိတယ်။
(ခ) လူနာ-ဆရာဝန်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းတော့ ရေးဘူးတယ်။ မေးခွန်းမှာပါတာက အထူးကုဆရာဝန်တွေမှာ အချိန်နည်းတာဖြစ်တယ်။ အဲတာလည်း မှန်တယ်။ ဆရာဝန်တွေကို အချိန်များများပေးပါပြောတဲ့နည်းက အဖြေမဟုတ်ပြန်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာကနေ့ဖြစ်နေရတဲ့ ဆေးကုသမှုနည်းစနစ်မှာ လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ စာတပုဒ်နှစ်ပုဒ် ရေးတာတောင်မှ ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ပါ။
(ဂ) နမူနာလေးတခုတော့ ပေးပါရစေ။ ကျွန်တော် ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့မနက်အိပ်ရာအထကတည်းက ခေါင်းမူးရောဂါ ဖြစ်တယ်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလဆန်းတုံးက ညအချိန်အရေးပေါ်ဆေးရုံသွားပြခဲ့တုံးကပေးတဲ့ဆေးသောက်တော့သက်သာတယ်။ ဆေးကုန်တော့မှာမို့ မနေ့က ဆရာဝန် (ကိုယ့်အတွက်သတ်မှတ်ပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်) ကို ဖုန်းနဲ့ရက်ချိန်းယူတော့ ကနေ့မနက် ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာသွားပြရတယ်။ ရောက်တာနဲ့ သူနာပြုက အခြေခံစစ်ဆေးတာတွေ (အလေးချိန် + သွေးဖိအား + နှလုံးခုန်နှုန်း + အပူချိန် + အသက်ရှူနှုန်း) တွေလုပ်တယ်။ ဆေးမှတ်တမ်းတွေအားလုံး (ကွန်ပြူတာထဲမှာ သိမ်းထားပြီး) ကို ပြန်ဖတ်ပြီး လိုတာကို မေးတယ်။ ခဏနေတော့ ဆရာဝန်ရောက်လာတယ်။ လိုတာတွေ စစ်မေးတယ်။ သက်သာတယ်ဆိုတဲ့ဆေးကို ကျွန်တော့်ရှေ့မှာတင် ဆက်သောက်ဖို့ ဆေးဆိုင်ကို (အီးမေးလ်) နဲ့ပို့လိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ဘာများမေးချင်သေလည်းလို့ ဆရာဝန်ကမေးတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး နာရီဝက်လောက်နေတော့ ဆေးဆိုင်ကနေ ဆေးလာထုတ်လို့ရပြီဆိုတဲ့ဖုန်းလာပါတယ်။ အခုစာရေးနေချိန်မှာ အန်တီက သူ့အတွက် မနေ့ကတည်းက ဆေးလာထုတ်ပါဆိုတဲ့ သွေးတိုးအတွက်ဆေးရော ကျွန်တော့ဆေးပါ ထုတ်လာခဲ့ပြီးပါပြီ။ အစကနေအဆုံး ပိုက်ဆံလည်းတပြားမှမကုန်ခဲ့ပါ။
သမီးအကိုတယောက်က ယခု့့ မှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ သူ့ခြေထောက်နာနေတာကြာနေပါပြီ။ မနက် အိပ်ယာထရင် မလှုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ သွေးပူမှလှုပ်ရှားလို့ကောင်းလာပါတယ်။ ဖြစ်တာက ၆ လလောက်ရှိပါပြီ။ အသက်က ၂၈ နှစ်ပါ။ မနေ့ကမှ ဓါတ်မှန်ရိုက်တာ ခြေဖနောင့်မှာအရိုးအတက်ထွက်တယ်လို့ သိရပါတယ်ဆရာ။ ဆရာဝန်တွေကတော့ ခွဲရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ငွေလဲကုန်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်လို့ရပါလဲဆရာ။
ခြေဖနောင့်အရိုးအတက်ဆိုတာ အရိုးလိုပဲ ကယ်လ်စီယမ်တွေစုပုံနေတာဖြစ်တယ်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ရင် လက္ခဝက်လောက်ရှိတဲ့ အတက်လေးထွက်နေတာတွေ့ရမယ်။ တခါတလေမနာဘူး။ ကြာတော့နာလာမယ်။ Plantar fasciitis ခေါ်တဲ့ ခြေအရွတ်ပြား ရောင်တာနဲ့ ဆက်စပ်နေတတ်တယ်။
ဘာလို့ဖြစ်သလည်း မပြောနိုင်ပါ။ အားကစားသမားတွေ ပြေးရတာများရင်ဖြစ်တတ်တယ်။ ဝတဲ့သူမျာများတယ်။ ဖိနပ် မတော်တာစီးရင်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အသက်ရလာတာ၊ ဆီးချိုရှိတာ၊ မတ်တတ်ရပ်များတာ၊ ခြေနှစ်ဖက် မညီတာတွေကနေ Plantar fasciitis ပါဖြစ်နိုင်တယ်။ နာရင် စူးရှပြီးနာတယ်။ အပ်နဲ့ထိုးသလိုနေမယ်။
နာတာက နားရုံနဲ့မသက်သာတတ်ပါ။ တချို့ဆို အိပ်ယာထ ပိုဆိုးသေးတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင် နာတာသက်သာမယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းနည်း + အနာသက်သာဆေး + ကော်တီဇုန်းထိုးဆေး နဲ့ ခွဲစိတ်ကုသနည်းတွေလုပ်ရနိုင်တယ်။
Stretching exercises ခြေလက်ဆန့်တန်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ ကောင်းတယ်။ ဖိနပ်အနေတော်ပါစေ။ Taping or strapping အထူးလုပ်ထားတဲ့ပလာစတာကပ်ထားနိုင်တယ်။ Physical therapy ဖီဇီကယ်သာရာပီ လုပ်နိုင်တယ်။ Functional orthotic device ခေါ်ကိရိယာတပ်ထားနိုင်တယ်။ ရေခဲတင်နိုင်တယ်။ ခြေထောက်ကို နားနေချိန်မှာ မြှင့်ထားပေးပါ။
Acetaminophen (Paracetamol/Tylenol), ibuprofen (Advil), Naproxen (Aleve) အနာသက်သာဆေး တခုခု သောက်နိုင်တယ်။ Corticosteroid injection ကော်တီဇုန်းထိုးဆေးထိုးရင် ဆေးအရှိန်ရှိနေရင် မနာတော့ဘူး။ Surgery ခွဲစိတ်ကုသနည်းလုပ်ရင် ၉ဝ% သက်သာပျောက်ကင်းတယ်။ ခွဲစိတ်နည်းမှာ Release of the plantar fascia နဲ့ Removal ofaspur ဆိုပြီး ၂ နည်းရှိတယ်။
Universal flu vaccine comes closer တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးနီးစပ်လာပြီ
လွန်ခဲ့တဲ့၉ နာရီကထွက်တဲ့ဆေးသုတေသနသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ တုပ်ကွေးမျိုးစုံကို တသက်တာကာကွယ်နိုင်မယ့် ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပါမယ်။ အကောင်တွေကို စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ။
အမေရိကန်ဆရာဝန်တွေကနေ နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးစမ်းသပ်နေတာပါ။ လက်ရှိထိုးနေရတာက တနှစ်တခါထိုးရတဲ့ ကာကွယ်ဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ တုပ်ကွေးဖြစ်စေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်က မြူတေးရှင်းခေါ်တဲ့မျိုးဗီဇပြောင်းပြောင်နေလို့ တနှစ်သာခံတယ်။ အဲဒီအခက်အခဲကိုကျော်လွှားတဲ့နည်းကရှာဖွေထားတာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိကာကွယ်ဆေးက ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုပစ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီနေရာက ပြောင်းလဲတတ်လို့ ဆေးသက်တမ်း ကြာကြာမခံပါ။
တုပ်ကွေးဆိုတာ နှာချေ ချောင်းဆိုးရာက တယောက်ကိုတယောက် ကူးစက်လွယ်ပါတယ်။
- ပုလဲမှာရွာတဲ့မိုး ပေါင်းမြက်တွေကတိုး၊
- သစ်ပင်တွေအရိုးရှည် လူသူမနေကြာရှည်၊
- လွမ်းသလေမောင်ကြီး ရွေးကောက်ပွဲနီး၊
- သည်းကြီးမည်းကြီး ၁၉၉ဝ တုံးကလို နယ်အစုံမှာ မဲမိုးကြီးရွာစေသောဝ်။
(ကနေ့ရိုက်ပို့လိုက်တဲ့ ပုလဲက ကျွန်တော့်ဆေးခန်းအိမ်ကလေး)
ကျနော်က ကို့့ ပါ။့့ ရွာဇာတိပါ။ အသက်(၃၈)နှစ်ပါ။ ကျနော့်ညာဘက်နားစည်က ပုံပါအတိုင်း အပေါက် ဖြစ်နေပါတယ်။ အသံတွေကိုကွဲကွဲပြားပြားမကြားရပါ။ ဖြစ်နေတာ (၅)နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ နားကျပ်တံအမြဲသုံးပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ညွှန်ကြားပေးပါဆရာ။
နားကို ခန္ဓာဗေဒအရ အပိုင်း ၃ ပိုင်းခွဲထားတယ်။ အပြင်ပိုင်း၊ နားစည်နဲ့ နောက်မှာ လေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ နားအလည်ပိုင်း ရှိတယ်။ နှာခေါင်းနဲ့ နားအလည်ပိုင်းက (ပြွန်) နဲ့ ဆက်နေတယ်။ နားထဲကလေဟာ အဲဒီလမ်းကနေ ပြန်ထွက်တယ်။ ဦးနှောက်နဲ့ဆက်နေတဲ့ နားအတွင်းဆုံးပိုင်း။
နားစည်က အလုပ် ၂ မျိုး လုပ်ပေးနေတယ်။
၁။ အသံလှိုင်းက လာရိုက်ခတ်ရင် အာရုံကြောကတဆင့် အသံကြားရတယ်။
၂။ အလည်နားပိုင်းကို အပြင်လောကကနေ အကာကွယ်ပေးထားတယ်။
နားစည် ဘာလို့ ပေါက်ရသလဲ -
• Otitis media နားအလည်ပိုင်းပိုးဝင်တာကနေထွက်တဲ့အရည်ရဲ့ဖိအားကြောင့် နားစည်ပေါက်ရတယ်။
• Barotrauma နားစည်ရဲ့အတွင်းပိုင်းနဲ့ အပြင်ဘက်မှာ လေဖိအား သိပ်ခြားနားတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်။ Airplane ear လို့ ခေါ်ကြတယ်။ Scuba diving လုပ်ရင်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
• သေနတ်သံလို၊ ပေါက်ကွဲသံ၊ ကျယ်လွန်းတဲ့အသံကြောင့် ဖြစ်တယ်။
• နားထဲကို အပြင်ပစ္စည်း တခုခုဝင်ရာကနေ ဖြစ်တယ်။
• ခေါင်းကို အပြင်းအထန်ခိုက်မိရာကနေ ဖြစ်တယ်။
• သိပ်အေးလွန်းတဲ့ ဥတုကြောင့်လဲ အအေးမိရာကနေ ဖြစ်စေနိုင်သေးတယ်။
• နားက နာနေမယ်။ နောက် ရုတ်တရက် နာတာပျောက်သွားတယ်။
• နားကနေ အရည်-ပြည်-သွေးထွက်မယ်။
• နားအကြား ထိခိုက်မယ်။
• နားထဲ ဆူညံသံတွေ ကြားနေရမယ်။
• ခေါင်း ပတ်ခြာလည်မူးမယ်။
• မူးရာကနေ ပျို့-အန်ချင်မယ်။
2. နားအလည်ပိုင်း ရောင်ရမ်းတာ၊
3. နားအလည်ပိုင်းအိတ် ဖြစ်လာတာ၊
တချို့မှာ ခွဲစရာမလိုဘဲ အပေါက်ကပိတ်ပြီး ပျောက်သွားမယ်။ ပျောက်ဘို့ ရက်သတ္တပါတ်နည်းနည်းကနေ လတွေအထိ ကြာနိုင်တယ်။ နားထည့်ဆေးတိုင်း နားစည်ပေါက်သူနဲ့ မတည့်ပါ။ နားအထူးကုဆရာဝန်ညွှန်တာကိုသာသုံးပါ။ CILOXAN Eye Drop မှာ Ciprofloxacin hydrochloride ပါတယ်။ ပိုးတွေကို နိုင်တဲ့ဆေးဖြစ်တယ်။ နာတာရှည် ပိုးဝင်နေရင် ရေချိုး-ရေကူးတိုင်း နားကို Ear plug ဆို့စရာ တပ်ရတတ်မယ်။
၆-၈ ပါတ်နဲ့ မပျောက်ရင် ခွဲစိတ်ဘို့ လိုနိုင်တယ်။ Paper patch တခုခုနဲ့ ဖါထေးတာရယ် Tympanoplasty ခွဲစိတ် ပြုပြင်နည်းရယ် ရှိတယ်။ ကံမကောင်း ရင်တော့ နှစ်တွေ ကြာနိုင်တယ်။ တချို့ကြ ပြန်မရတတ်ဘူး။ Tympanoplasty ခွဲစိတ်ကုသတာက ၈၅-၉ဝ% အောင်မြင်တယ်။ တချို့မှာ နောက်တခါ ထပ်ခွဲရတတ်တယ်။
- ဖေ့စ်ဘွတ်မှာတော့ မဲလာဆွယ်လို့မရ။ အားလုံးက အရွေးခံမယ့်သူတွေထက်သာတယ်။
- အဲလိုလူတွေထက်သာတာက အရွေးမခံမယ့်သူ။ ဆူဆူလုပ်ရင် သန်းကောင်ယံမှာလာခဲ့မယ်တဲ့။
- ဘယ်ရမလည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ကလူတွေကလည်း သန်းကောင်ထက် ညဉ့်မနက်သူချည်းပဲ။
- ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေမှာ ဖရင်း ၅ဝဝဝ တိတိရှိတယ်။ အပ်ချင်သူရှိလာရင် အရင်လူတွေကို မိဘနှစ်ဆက် စစ်ကြည့်ပြီး ထုတ်လိုက်မယ်။
- ဖေ့စ်ဘွတ်မှာလို ပါဝါရှိတာက ကော်မရှင်။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကြည့်ပြီး ဘလော့ဖို့ကအဆင်သင့်တဲ့။
- ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးတာကို စိစစ်ရမယ်ဆိုသူကို ချိုတပ်ပေးလိုက်ပြီ။
- ဖေ့စ်ဘွတ်အထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိစေရ။ မဟုတ်သေးဘူး အဲလိုပြောတဲ့သူ ခံရတတ်တယ်။
- ဖေ့စ်ဘွတ်အပြင်ဖက်မှာ ၂ဝ၁၅ ရလဒ်ရှိတယ်။
ရေဒီယိုကို မြန်မာ့အသံတခုတည်းသာရှိကတည်းက (အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝ) နားထောင်လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်မှာ မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါလို့ ဘွဲ့အမည်ရတဲ့ (ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ၊ အေအိုင်အာ) ခေတ် (အာရ်အက်ဖ်အေနဲ့ ဒီဗွီဘီ ကို မထည့်သေးပါ) ရောက်တော့လည်း နေ့-ည မပြတ်နားထောင်ခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ (ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ၊ အာရ်အက်ဖ်အေ) သုံးခုကို တနေ့မှာ မနက်-ည အနည်းဆုံး နှစ်ခုကို အွန်လိုင်းကနေ နားထောင်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲလာတာတွေကို သတိထားမိတယ်။ မြန်မာ့အသံခေတ်တုံးက ဆရာရွှေဥဒေါင်းကနေ မြန်မာ့အသံသည် ကျွန်ုပ်၏ နားကိုကလောစေ၏လို့ လုပ်သားပြည်သူ့နေ့စဉ်မှာရေးတာကို ဖတ်ဖူးတယ်။
အခုတော့ ပြည်ပရေဒီယိုများတွင် အင်တာဗျူးပေးသူများသည် ကျွန်ုပ်၏နားထဲ အဆီအငေါ်မတည့်ဝင်လာတတ်၏။ တခါတရံ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓါန်ကိုလှန်ခိုင်း၏။ အခုလေးတင်းကြားလိုက်သေးတယ်။ ကွန်ဆာလ်တေးရှင်း မီတင်တွေ လုပ်ပါသတဲ့။ ကျွန်တော်လည်း တခါခါ လျှာချော်သွားတတ်၏။
ဆရာရှင့် ကျွန်မ အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်ကျတာ ၃ နှစ်ရှိပါပြီ။ အမျိုးသားက ၂၆ ပါ။ အခုလက်ရှိ့့ မြို့မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ရာသီမမှန်တာ အိမ်ထောင်စကျကတည်းကပါ။ အပျိုတုန်းကတော့ အမြဲရာသီမှန်မှန် လာပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့ ၃လ သန္ဓေတားဆေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်း ရာသီမမှန်လို့ OG နဲ့ ပြကြည့်တော့ PCOS ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ PCOS နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာရေးထားတဲ့စာတွေဖတ်ဘူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မမှာ PCOS ရဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ အမွေးပေါက်များတာ ဝက်ခြံတွေအများကြီးထွက်တာ အဝလွန်တာတွေမရှိပါဘူး။ အာလ်ထာဆောင်း အဖြေမှာ ovaries မှာ ရေအိပ်သေးသေးလေးတွေ အများကြီးဖြစ်နေတာနဲ့ ရာသီ လုံးဝထိန်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သန္ဓေတားဆေးမသောက်ရင် လုံးဝရာသီမလာပါဘူး။ ကျွန်မဆီမှာ အမ ၂ ယောက်ရှိပြီး တစ်ယောက်က သားသမီး ထွန်းကားပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကလဲ PCOS ဖြစ်နေပါတယ်။ သူလဲအိမ်ထောင်ကျတာ ၅ နှစ်ရှိပြီး ကလေးမရသေးပါဘူး။ ကျွန်မ အခုလက်ရှိ တစ်နေ့ကို diane35 နဲ့ metformin 500mg ၁ လုံးစီ သောက်နေပါတယ်။ ဆရာရေးတဲ့စာထဲမှာ clomid ကိုသုံးရမယ်လို့ဖတ်ဘူးပါတယ်။ ကျွန်မအမ ရန်ကုန်မှာဆေးခန်းပြတော့ PCOS ရှိသူတွေကို သားဥကြွေဆေးသောက်ခိုင်းလို့မရဘူးလို့ သူ့ပြတဲ့ OG ကပြောပါတယ်။ အဲဒါဘာဖြစ်လိုပါလဲ။ ကျွန်မ ရန်ကုန်မှာ နေတုန်းကလဲ OG ၂ ယောက် ၃ ယောက်နဲ့ပြဖူးပါတယ်။ သူတို့လဲ ကျွန်မကို သားဥကြွေဆေးမပေးပါဘူး။ သန္ဓေတားဆေး Diane35 တွေ metformin နဲ့ carbagolin တွေ တလှည့်စီပေးပြီး ဆေးရပ်ပြီး စောင့်ကြည့်ရင် ကောင်းသွားလိမ့်မယ်။ ကလေးရလိမ့်မယ်လို့ပဲပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မကောင်းလာပါဘူး။ သန္ဓေတားဆေး မသောက်ရင် လုံးဝရာသီမလာပါဘူး။ ၃ လ ၄လ ရပ်ပြီးစောင့်ကြည့်လဲ မထူးပါဘူး။ ကျွန်မအဓိကသိလိုတာက ကလေးလိုချင်ပါတယ်။ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။ သားဥကြွေဆေးသောက်လို့ရပါသလား။ သန္ဓေတားဆေးကို ရပ်လိုက်ရင် ရာသီ ထိန်နေတဲ့အတွက် သားဥကြွေဆေးကို ဘယ်အချိန်တွေမှာ ဘယ်လိုသောက်သင့်ပါသလဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါရှင်။
Clomid (Clomiphene citrate or Serophene) ဆေးဟာ ကလေးမရသေးသူတွေအတွက်ပေးတဲ့ မျိုးဥထွက်ဆေး ဖြစ်တယ်။ မျိုးဥမထွက်တာကို Anovulation ခေါ်တယ်။ အများဆုံးဖြစ်စေတာက polycystic ovarian syndrome (PCOS) ခေါ် မျိုးဥအိမ်ထဲမှာ အိတ် (အလုံး) လေးတွေ များနေလို့ဖြစ်တယ်။
အဲလိုအမျိုးသမီးတွေကို ဒီဆေးပေးနည်းနဲ့ကုသရင် ကိုယ်ဝန်ရလမ်း ကောင်းပါတယ်။ အသက် ၃၅ နှစ်အောက်ဆိုရင် အခွင့်အလမ်းပိုကောင်းတယ်။ လူတိုင်းတော့ မကောင်းပါ။ ၄ ယောက်ကိုပေးရင် ၁ ယောက်မှာ မျိုးဥထွက်တာတွေ့ရတယ်။ အသက် ၃၅ နှစ်အောက်ကို Clomid ဆေး ၃-၄ လပေးရင် လစဉ် ၏ကိုယ်ဝန်ရလမ်း ၁၅% ရှိတယ်။ သူတို့မှာ သားအိမ်ပြွန် ပိတ်မနေရဘူး။ ခင်ပွန်းရဲ့သုက်ရည်ကလည်း အရေအတွက် + အရည်အသွေးမီရမယ်။ ဆေးပေးလို့ မျိုးဥထွက်သူတွေထဲက ၅ဝ% ကိုယ်ဝန်ရတယ်။
PCOS ရှိတဲ့ အသက် ၃၅ နှစ်အောက်အမျိုးသမီးတွေကို IVF နည်းနဲ့ကလေးရအောင်လုပ်တာမှာ တကြိမ်လုပ်ရင် ၇ဝ% အောင်မြင်တယ်။ ၆ဝ% ကလေးအကောင်းမွေးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်တဲ့နှုန်းက ကွဲပြားတာ တွေ့ရတယ်။
ရာသီပထမနေ့ဆိုတာ သွေးစဆင်းတဲ့နေ့ကိုခေါ်တယ်။ ရာသီမလာတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင် ရာသီလာအောင် ဆေးပေးရတယ်။ Provera (medroxyprogesterone acetate)5or 10mg ကိုနေ့စဉ် ၅ ရက်ကနေ ၁ဝ ရက်အထိ ပေးတယ်။ ဆေးနောက်ဆုံးရက်နောက် ၂ ရက်ကနေ ၇ ရက်မှာရာသီဆင်းမယ်။
Clomid ဆေးကို ရာသီလအစပိုင်းရက်ကနေစပေးတယ်။ တတိယနေ့ကနေ ၅ ရက်ဆက်တိုက်ပေးတယ်။ သတ္တမနေ့အထိ ဖြစ်တယ်။ ၅ ရက်မြောက်နေ့ကနေစပေးရင် ၉ ရက်မြောက်နေ့အထိဖြစ်မယ်။ Clomid 50mg နေ့စဉ်ပေးတာနဲ့စတယ်။ ရာသီမလာသူတွေကို Provera ဆေးနဲ့ ရာသီလာစေပြီးနောက် Clomid 100mg ကို အဲဒီရက်တွေအတိုင်းပေးမယ်။ အဲတာလည်းမရသေးရင် Clomid 150mg ကိုပါပေးသေးတယ်။ မျိုးဥက Clomid ဆေး ၅ ရက်ပေးပြီးနောက် ၈ ရက်နဲ့ ၁ဝ ရက်တွေမှာထွက်တယ်။ ဆိုလိုတာက ရသီလရဲ့ ၁၅ ရက်မြောက်နဲ့ ၂ဝ ရက်မြောက်မှာ မျိုးဥထွက်မယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက် မတူတာလည်းရှိတယ်။ ဒုတိယနဲ့ တတိယပါတ်ရောက်မှထွက်သူလည်းရှိတယ်။ အသက် ၄ဝ ကျော်သူတွေကို ဆေးပေးတာ မထူးလှပါ။
PCOS ရောဂါရှိသူတွေအတွက် Clomid နဲ့ Metformin ဆေး၂ မျိုးတွဲပေးနည်း
Metformin (Glucophage) ဆေးကို ဆီးချိုအတွက်အများဆုံးသုံးတယ်။ Metformin တမျိုးတည်းပေးနည်းလည်း လုပ်တယ်။ မရရင် ဆေး ၂ မျိုးတွဲနည်းနဲ့ကုသမယ်။
Metformin ဆေးပေးပြီး တလနေမှသာအစွမ်းသိရတယ်။ ရက် ၃ဝ ကနေ ၉ဝ အထိပေးရတတ်တယ်။ Metformin 500 mg ကို တရက် ၁ ကြိမ် တပါတ်၊ နောက် ၂ ကြိမ်တပါတ်၊ နောက် ၃ ကြိမ်တပါတ်ပေးတယ်။ ၃ ကြိမ်ကိုမခံနိုင်ရင် ၂ ကြိမ်သာ ပေးမယ်။
Clomiphene 50 mg ကို နေ့စဉ် ၅ ရက်ပေးမယ်။ တတိယရက်ကနေ သတ္တမရက်အထိ။ (သို့) ပဉ္စမရက်ကနေ နဝမရက်အထိ။ ရာသီမလာသူဆိုရင် Provera ပေးပြီးရာသီလာစေမယ်။ Clomiphene ကို 50mg နဲ့မရရင် 100 mg ပေးမယ်။ 150 mg အထိပေးနိုင်တယ်။ အောင်မြင်မှုနှုန်းကွဲပြားတယ်။ အသပ် ၃၇ နှစ်အောက်ဆိုရင် ၁ဝ-၁၅% ရှိတာတွေ့ရတယ်။ IUI နည်းဆိုရင် ၁၅-၂ဝ% ရှိတယ်။
Glucophage / Metformin and Clomid ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ဗိုက်အောင့်မယ်။ ဝမ်းပျက်မယ်။ ပျို့မယ်။
ပို့စ်တခု = (ကို)့့ ရေ ပရဟိတလုပ်တာကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာတော့ဖတ်စေ့ချင်တယ်။ ပါတီနိုင်ငံရေးတို့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးတို့ ခွဲပြောနေကတည်းက စာမဖတ်တာသေချာတယ်။
ကျွန်တော့်ကိုလည်း အသိဘုန်းဘုန်းတပါးက အမျိုးသားနိုင်ငံရေးနဲ့ ပါတီနိုင်ငံရေး ရေးပါအုံးတဲ့။ ကြံချောင်းကို အရင်းနဲ့အဖျား အကြိုက်မှာ ပညာပြိုင်ကြသလိုမျိုး ပညာမပါလို့ ဘာရေးရမလည်း စဉ်းစားနေတုံးပါဘုရားလို့ လျှောက်ထားခဲ့တယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရေးကို All politics is national နိုင်ငံရေးဟူသမျှ အမျိုးသားရေးဖြစ်တယ်လို့ ၁၃-၇-၂ဝ၁၂ နေ့က ဂျော့ မေဆင် ဥပဒေ တက္ကသိုလ် တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေးဗစ် ရှလက်ချာကနေ အတ်တလန်းတစ်ဂျာနယ်မှာ ရေးခဲ့တယ်။
အရင်က မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အမျိုးသားရေးဆိုတာ ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးအဖြစ်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ အခုသုံးနေတာက ကိုလိုပြုသူတွေဖက်ကနေသုံးလာတာသာဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်အာဏာသိမ်းသူတွေကစပြီး အမျိုးသားနိုင်ငံရေး စကားလုံးကို ဘာလိုလိုညာလိုလိုသုံးရာကနေ ကူးစက်ရောဂါလိုဖြစ်လာတယ်။ အဲတာလည်း အဘရောဂါပါပဲ။
ဒီမိုကရေစီသာဆိုရင် ပါတီနိုင်ငံရေးမလုပ်ရင် ဘာလုပ်မှာလည်း။ တသီးပုဂ္ဂလလို့တော့မပြောနဲ့။ အဲတာက တကိုယ်တော် နိုင်ငံရေးပါတီပါပဲ။ ငါကမှ အများအတွက်ပြောအုံးမလား။ အဲတာလည်း ငါနိုင်ငံရေးပါတီပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်တိတိကတင်တာကို ဖေ့စ်ဘွတ်ကအသိပေးလို့ ပြန်တင်ပါရစေ။
• လူတိုင်းကိုယ်စီ ဝတ္ထ္ထုတိုရှည် ရှိကြသည်၊
• အပြောကောင်းသူပြောတာ နားထောင်ကောင်းမည်၊
• အရေးကောင်းသူရေး ဖတ်လို့ကောင်းမည်၊
• ရသတော့ရမည်၊ အတည်ယူလို့မရတာတွေ ရှိပါမည်၊
• မပြောတဲ့ဇာတ်လမ်းက ပိုကြမ်းနိုင်သည်၊ ပိုလွမ်းရနိုင်သည်၊ ပိုသင်္ခန်းစာရနိုင်စရာရှိမည်။
• ပြောချင်လျှက်နဲ့ ပြောမထွက်တာတွေ သေချာပေါက်ရှိကြပေသည်၊
• ကိုယ့်အကြောင်းသာမက သူများအကြောင်းတွေလဲ ထုတ်ပြောလို့မကောင်းတာတွေ ရှိပေသည်၊
• ပြောတိုင်း၊ ရေးပြတိုင်း အကုန်မယူသင့်သလို၊ ပြောမပြတာကိုပါ နားလည်ယူကြရမည်၊
• အပြောမခံရသူတိုင်းကို ကိုင်းရှိုင်းသင့်တယ်လို့ မထင်သင့်ပါ၊
• စာတွေလည်းဖတ်ပါ၊ စာထဲမှာမပါတာကိုလည်းဖတ်ပါ။ ။
Medicine advertisement ကြော်ငြာဆေးအမေးကနေ သက်တမ်းတိုစေတယ်
ကြော်ငြာဆေးတွေ မေးလာကြပြန်ပြီ။ အရပ်ရှည်ဆေးနဲ့ ပိန်ဆေးတွေ။ တယောက်ပြီးတယောက်။
၁။ ဆရာရှင့် ဆရာ့ post မှာ တစ်ခါတင်ဖူးတဲ့ပိန်ဆေးပါ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သောက်ရမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ရှင်။ ကလေး မွေးပြီးထဲက တဖြည်းဖြည်းဝလာတာပါပဲ။ လက်မောင်းထဲထည့်တာပဲ။ တားဆေး အခြားဆေးဘာမှ မသောက်ပါဘူးဆရာ။ ကလေးမမွေးခင်ကတော့ အစာအိမ်ရောင်ဖူးပါတယ်။ သောက်လို့ရလားသိချင်လို့ပါ။
ကြော်ငြာဆေးဖြစ်တယ်။ ဂူဂယ်လ်မှာ ရှာမရပဲ ဖေ့စ်ဘွတ်သာရှိတယ်။ ဆိုလိုတာက ဆေးသုတေသနမရှိပါ။
၂။ ဆရာ calcium USA အကြောင်သိချင်လို့ပါ။ ဆရာတင်ထာပြန်ရှာတော့ ရှာမတွေ့ဘူဖြစ်နေတယ်။ ကျေးဇူပြု၍ ပြန်တင်ပေအုန်းခင်ဗျာ။
High Up-Calcium USA အရပ်ရှည်ဆေးကိုမေးလို့ဖြေနေရတာ လူ ၂ဝ လောက်ရှိပြီ။ ဆရာဝန်တွေ တကယ်သုံးတဲ့ ဆေးမျိုးကို အဲလောက်မမေးကြပဲ ကြော်ငြာဆေးပဲမေးနေကြတယ်။ အဲလိုဟာတွေဖြေနေရတာ အချိန်ဖြုန်းနေရသလိုပဲ။ ခဏနေရင် ဘယ်မှာဝယ်ရမလည်းမေးအုန်းမယ်။ ကောင်းသလားလည်းမေးအုန်းမယ်။ အခုလည်းပြန်တင်ခိုင်းနေတယ်။
ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက်၂၆ပါ။ အရပ်ပုပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာအရပ်ရှည်ဆေး ကြော်ငြာတွေ့လို့ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ တကယ်ပဲ ၂၆ ကျော်လဲရှည်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ ၃ လ သောက်ရတယ် ပြောပါတယ်ဆရာ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ရှိလားသိချင်ပါတယ်။ ဆရာအသက်ရှည် ကျန်းမာပါစေ။
အသက်တော့ ရှည်ချင်ရှည်မယ်။ အရပ်တော့ မရှည်နိုင်တော့ပါလို့ ဖြေလိုက်ရတယ်။
နောက်တယောက်လည်း ဆေးကပ်ကိုဓါတ်ပုံရိုက်ပို့တယ်။ စာလုံးကိုရိုက်ရှာတာ ဝက်ဆိုက်က Spam ဖြစ်နေတော့ ဘယ်လိုမှ ဝက်ဆိုက်ကိုပြန်ပိတ်မရ ကွန်ပြူတာကို ရှတ်ဒေါင်းလုပ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ယူရတယ်။ ကွန်ပြူတာသက်တမ်းတော့ တိုတော့မယ်ထင်တယ်။
၁။ သမီးက ၂ဝ၁၂ လောက်က အသက်က ၂၇ ပါ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ ခံစားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အဲ့အချိန်တုန်းကတော့ အိမ်ထောင်မရှိသေးပါဘူး။ ဘယ်သူနဲ့မှလည်း အတူမနေဖူးပါဘူး။ သွေးလှူလှူနေရင်းနဲ့ ဘယ်လိုအကူးခံရလဲတောင် မသိခဲ့ပါဘူး။ စဖြစ်ခါစသွးစစ်တော့ VDRL2dilute (TPHA positive) ပြပါတယ်။ အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဆေးထိုးမယ်ပြောတော့ ပင်နီဆလင် တပတ် ၁ လုံးနဲ့ ၃ ပတ်တိတိ ဆေး ၃ ကြိမ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ အခုအသက်က ၃ဝ၊ ကိုယ်ဝန်က ၃ လ ရှိနေပါပြီ။ ဆေးကုသမှုလုပ်ပြီး တပတ်နေမှာ သွေးထပ်စစ်တော့ VDRL 1 dilute ဆိုပြီးပဲ ပြပါတော့တယ်။ အဲ့လိုနဲ့ သမီးလည်း သွေးကို non-reactive မပြမချင်း သွေးစစ်သော်လည်း သွေးအဖြေက အခု ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်ထိ VDRL 1 dilute ဆိုပြီးပဲ ပြနေတုန်းပါပဲ သမီးလည်းအဲ့ဒါနဲ့ ဆစ်ဖလစ်ဖြစ်တုန်းက ဆရာဝန်ကို ပြန်ပြတော့ ဆရာဝန်က ပြောပါတယ် active မဖြစ်ပါဘူး ဒါဟာ သွေးထဲမှာတဲ့ အမာရွတ်လို ပုံစံနဲ့ကျန်နေတာပါတဲ့ ကလေးကိုလည်း မကူးစက်နိုင်ပါဘူးတဲ့ ဆေးဝါးကုသမှုလည်းမလိုပါဘူးလို့ OG ကိုပြောခိုင်းပါတယ် dilute တွေ တက်လာရင်သာ ဆေးကုသမှုလုပ်ရမှာပါတဲ့၊ 1 dilute နဲ့2dilute ဆိုတာက ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့၊ ကွာဟမှု သိပ်မရှိပါဘူးတဲ့၊ ဆေးမှတ်တမ်းတွေကိုသာ သေချာသိမ်းထားပါ OG ကိုပြောပါတဲ့။ အိမ်ထောင်မကျခင်က အမျိုးသားကို သွေးစစ်တော့ non-reactive လို့ပဲပြပါတယ်။ ဆေးကုသမှုလုပ်ခဲ့သားနဲ့ non-reactive က ဘယ်အချိန်မှာ ပြနိုင်ပါသလဲဆရာ။ သမီးရဲ့ ကလေးကို VDRL 1 dilute or2dilute ဆိုတာပြနေသေးတော့ ကူးစက်နိုင်ပါသလား။ ဆေးသောက်ဖို့ရော လိုအပ်ပါသလားဆရာ။ သမီးရဲ့ ဆေးကုသမှုကရော ပြည့်စုံလုံလောက်ခဲ့ပါသလားဆရာ။ သမီးကလေးကို ကူးစက်မှာလည်း စိုးရိမ်တယ်ဆရာ။ ဆစ်ဖလစ်ဖြစ်တုန်းက ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်းကိုလည်း ဆရာ့ဆီ ပူးတွဲတင်ပြပေးပါမယ်။
၂။ ဆရာရှင့် သမီးသိချင်တာတခုကို ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်။ RPR (VDRL) ရောဂါအကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး positive ရှိနေတဲ့သူက ဘယ်လိုကူးစက်နိုင်တယ် ဘယ်လိုကုလို့ရတယ်၊ အရှင်းပျောက်နိုင်လား အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲ ဆိုတာကို စုံလင်စွာသိချင်ပါတယ်ရှင့်။
၃။ ကာလသားရောဂါပိုး စစ်တယ်ဆိုရင် ဂနို၊ စစ်ဖလစ်တို့ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပိုးတွေကို စစ်တာလားခင်ဗျာ။ အဖြေက မရှိဘူးဆ်ိုပေမယ့် ပိုးက အောင်းနေတတ်ပါသလား။ အမျိုးသားများဆီးအောင့်ခြင်းအရ အမျိုးသမီးမှာ ဘာများဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။
၄။ ကျွန်တော့်ရောဂါကို ဆေးခန်းသွားပြကြည့်တယ်။ အရင်ဆုံး ဆေးစစ်ပါတယ်။ ဆေးထပ်စစ်လိုက်တော့ VDRL မှာ WR ဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။ သူပြောတာတော့ သိပ်မရှိဘူးလို့ ပြောတယ်။ အဲဒါဘာကို ပြောတာဘဲ။ ပြီးတော့ TPHA ကို စစ်တာလို့လည်း ပြောပါတယ်။ အဲဒီ TPHA ကတော့ Plus ပါ။ သူကပြောတယ် အဲဒီ TPHA က အပေါင်းပြပြီးရင် နောက် ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် အဲဒါကို ထပ်စစ်ရင် အပေါင်းပဲပြတော့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ရောဂါပျောက်သွားလည်း အပေါင်းပဲ ပြတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ သိချင်လို့ပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ဆေးထိုးမလား၊ ဆေးသောက်မလား ဆိုပြီး မေးတယ်။ အဲဒါက ဆေးသောက်ရုံနဲ့ ပျောက်နိုင်သလား။ ဆေးနာမည်မေးကြည့်တော့ Doxycycline (100 mg) တဲ့။ အဲဒီဆေးရဲ့ အစွမ်းအာနိသင်က ဘာလဲ။
အရင်က ကာလသားရောဂါလို့ခေါ်တဟာ ဆစ်ဖလစ်ကိုဆိုလိုတယ်။ ဂနိုအပါအဝင်ဆခြားအဲလိုရောဂါတွေကို လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါများလို့ခေါ်တယ်။ ဆေးစစ်တာက တမျိုးခြင်းကိုစစ်တယ်။ စုံတွဲတခုမှာ တယောက်ကနေ ရောဂါရှိနေရင် နောက်တယောက်ကို ကူးစက်မယ်။
VDRL နဲ့ TPHA တွေက (ဆစ်ဖလစ်) ရောဂါ အတွက် စစ်တာတွေပါ။ VDRL test က အပေါင်းလက္ခဏာ ပြတိုင်းတော့ ဒီရောဂါရှိတာလို့ အားလုံးကိုမပြောနိုင်ပါ။ ထပ်ပြီး Treponema Pallidum Haemagglutination (TPHA) test ဆက်စစ်ပါမယ်။ သူပါ (ပေါဇေးတစ်ဖ်) ဖြစ်ရင် (ဆစ်ဖလစ်) ရှိတာ သေချာတယ်။ RPR ဆိုတာ rapid plasma regain ဖြစ်ပါတယ်။ ဆစ်ဖလစ်ကိုစစ်တာပါပဲ။ အင်တီဘော်ဒီကိုစစ်တာပါ။ သိပ်စောနေရင်၊ သိပ်နော်ကျရင် မှားတဲ့အနုတ် ပြနိုင်တယ်။ အပေါင်းပြရင်လဲ ပိုသေချာတဲ့နည်းကိုဆက်လုပ်ရပါမယ်။ FTA-ABS နည်းနဲ့ ဆစ်ဖလစ်နဲ့ ဒီရောဂါမဟုတ်တာကို ခွဲခြားနိုင်တယ်။
Benzathine penicillin G 2.4 million units IM ၏၇ ရက်တပါတ် ၁ လုံးနဲ့ ၃ ပါတ် ထိုးရင် ပျောက်ပါတယ်။ ဆစ်ဖလစ်အတွက် ပဌမတန်းဆေးအဖြစ် သတ်မှတ်တယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ။ ဝမ်းပျက်၊ မွေးလမ်း-စအို-အရေပြားယား၊ ပါးစပ်နာ၊ ခေါင်းကိုက်၊ မျက်စိကြည့်မကောင်း၊ အရေပြား အနီထွက်၊ အပိန့်ထွက်၊ အသက်ရှူခက်။ နေလောင်၊ မျက်စိ-အရေပြားဝါ၊ ဆီးနီ၊ ဝမ်းအရောင်ပျော့၊ အစားပျက်၊ အန်ချင်၊ အစာမကျေ၊ ဗိုက်နာ၊ အားယုတ်၊ စိတ်မကြည်၊ ဆီးနဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေကို မပေးပါ။ အထဲက ကလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ သွားတွေ အရောင်မလှဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေရဲ့ သတ္တိကိုလဲ ထိခိုက်နိုင်တယ်။
Primary ပထမအဆင့် = 16.47%
Secondary ဒုတိယဆင့် = 27.56%
Broad spectrum antibiotics နဲ့ 2.4 MU benzathine penicillin ဆေးပေးထားသူတွေမှာ ကွာခြားမှုမရှိတာတွေ့ရတယ်။
4.8 MU benzathine penicillin နဲ့ procaine penicillin ဆေးပေးသူတွေမှာ ရလဒ်ပိုကောင်းကြတယ်။
၁။ VDRL test စမ်းနည်းဟာ ဆေးကုသမှုရသူတွေက်ုကို နောက်ပိုင်းဆက်လေ့လာဖို့ သုံးသင့်တဲ့နည်းဖြစ်တယ်။ ဆေးကုတာ စောလေကောင်းလေဖြစ်တယ်။
၂။ Benzathine penicillin များများနဲ့ Procaine penicillin ဆေးပေးရင် Seroconversion ခေါ်သွေးရည်ကြည် စစ်ဆေးတာကို နဂိုအနေရောက်စေဘို့ ပိုမြန်စေတယ်။
ယာဉ်စီးရင် မူးတာ-ပျို့တာ-အန်တာ သက်သာစေဘို့မှာသုံးနိုင်တယ်။ မေ့ဆေးကြောင့် အဲလိုဖြစ်တာအတွက်လည်း သုံးနိုင်တယ်။ ကိုယ်ထဲမှာရှိနေကြတဲ့ acetylcholine နဲ့ norepinephrine တွေကို မျှခြေမှန်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ဆေး ဖြစ်တယ်။ ဦးနှောက်မှာရှိတဲ့ ပျို့-အန်တာကိုအချက်ပေးစနစ်ကိုပါ ပိတ်ပေးစေနိုင်တယ်။ ကလေးတွေကိုမသုံးရပါ။
ကပ်ထားတာကိုခွါလိုက်ပြီး အမွှေးမထူတဲ့ သန့်တဲ့ကိုယ်အရေပြားတနေရာရာမှာကပ်ပါ။ ၃ဝ စက္ကန့်ကြာဖိပေးပါ။ ကပ်စရာမှာပါနေတဲ့ဆေးကို ၃ ရက်တာထုတ်ပေးနောတာကို အရေပြားကနေစုပ်ယူလိမ့်မယ်။ မူး-အန်စရာမဖြစ်မီ ၄ နာရီ ကြိုတင်ကပ်ထားပေးပါ။ နလိုရတော့ရင် စောပြီးခွါပါ။ လိုသေးရင် ၃ ရက်နေတော့ အသစ်လဲကပ်ပါ။
ဗိုက်ခွဲမွေးတဲ့ခွဲစိတ်မှုအတွက်ဆိုရင် မခွဲခင် ၁ နာရီသာကြိုတင်ပါ။ ဒါမှ ဆေးက ကလေးဆီမရောက်စေမှာဖြစ်တယ်။ ခွုပြီး ၂၄ နာရီမှာခွါပြစ်ပါ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအရ သူငယ်အိမ်ကိုကျယ်စေလို့ ခဏတာ မျက်စိကြည့်မကောင်းတာဖြစ်စေမယ်။ ခွါပြစ်ပြီးနောက်မှာ နည်းနည်းခေါင်းမူးနေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာထိန်းရတာအားနည်းမယ်။ ခေါင်းနည်းနည်းကိုက်နိုင်တယ်။ ကြွက်သား အားနည်းနေနိုင်တယ်။ နှလုံးခုန်းနှေးမယ်။ အာခေါင်ခြောက်နေမယ်။ ချွေးထွက်နည်းမယ်။ ဝမ်းချုပ်မယ်။ ဆေးနည့် မတည့်သူဆိုရင် (အလားဂျစ်) ဖြစ်စဉ်ရနိုင်တယ်။ ရှားတယ်။
သတင်း = ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ရေဘေးအတွက် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကြီးကို ရပ်နားလိုက်သည်။
ကမ္ဘာအဆိုးဝါးဆုံး သဘောဝဘေးတွေ (၂၅) ခုစာရင်းရှိတယ်။ ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်တွေမှာ သဘာဝေ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဘယ်လွှတ်တော်၊ ဘယ်ကွန်ဂရက်မှ ရပ်နားရတယ်လို့မရှိပါ။
1. 526 = Antioch Earthquake ဆီးရီးယား ငလျင်
2. 1138 = Aleppo Earthquake ဆီးရီးယား ငလျင်
3. 1348 = The Black Death ဥရောပ ပလိပ်ကပ်
4. 1600s = The Great White Plaque ဥရောပ တီဘီကပ်ရောဂါ
5. 1775 = North American Smallpox Epidemic မြောက်အမေရိက ကျောက်ကြီးရောဂါကပ်
6. 1918 = Spanish Influenza စပိန် တုက်ကွေးရောဂါကပ်
7. 1920 = Haiyuan Earthquake တရုပ် ငလျင်
8. 1931 = Yangtze River Floods ယန်စီမြစ်ရေလျှံခြင်း
9. 1970 = Bhola Cyclone ဘင်္ဂလာဒက်ရှ် ဆိုက်လုန်
10. 1976 = Tangshan Earthquake တရုပ် ငလျင်
11. 1985 = Nevado del Ruiz Volcano Eruption ကိုလမ်ဘီယာ မီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်း
12. 1993 = Hurricane Andrew အာဖရိကအနောက်ဖက်ကမ်းခြေ ဟာရီကိန်း
13. 1994 = North Korean Famine မြောက်ကိုရီးယား အစာရေစာငတ်မွတ်ခြင်း
14. 2000 = Mozambique Flood မိုဇမ်ဘစ် ရေလျှံခြင်း
15. 2001 = Gujarat Earthquake အိန္ဒိယ ဂူဂျရတ် ငလျှင်
16. 2003 = European Heat Wave ဥရောပ အပူလှိုင်း
17. 2004 = Indian Ocean Earthquake အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ ငလျင်
18. 2005 = Hurricane Katrina အမေရိက ကက်ထရီနာ ဟာရီကိန်း
19. 2005 = Pakistan Earthquake ပါကစ္စတန် ငလျင်
20. 2008 = Afghanistan Blizzard
21. 2008 = Cyclone Nargis နာဂစ် ဆိုက်ကလုန်း
22. 2010 = Haiti Earthquake ဟေတီ ငလျှင်
23. 2011 = East Africa Drought အရှေ့အာဖရိက မိုးခေါင်ခြင်း
24. 2011 = New Zealand Earthquake နယူးဇီလန် ငလျှင်
25. 2011 = Tōhoku Earthquake and Tsunami ဆူနာမီ။
တူအရင်းတယောက်က မနက်ကရေးထားတာ ဖတ်ရတယ်။ သူကငယ်သေးတယ်။
Ogga Linn ဘာဆက်လုပ်ရပါ့။ အော့့် နိုင်ငံရေး။ အတွင်းသိလေ စိတ်ညစ်လေပါဘဲ။
ယောက်ျားလေး-မိန်းကလေးတိုင်း Puberty အရွယ်ရောက်ကာစမှာ အပျို-လူပျိုဖြစ်လာတဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ်ကြီးကို စိုးရိမ် ထိတ်လန့်တတ်ကြတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ သိစရာတွေက တိုးတိုးလာတယ်။ အချိန်တန်ရင်တော့ အိမ်ထောင်ပြုကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရင့်ကျက်နေပြီ။
သားသမီးတွေ ထွန်းကားလာကြတယ်။ မျိုးဆက်သစ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာကြစမြဲဖြစ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ တည်ငြိမ်နေပြီ။
Oo Yetun ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၁၆၇ နေရာအနိုင်ရပါကတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၁၆၆ နှင့်ပေါင်းပြီး ၎င်းတို့လိုလားသူတဦးကို သမ္မတတင်မြှောက်ကာအစိုးရဖွဲ့စည်းနှိုင်မည်။ NLD ပါတီအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (ပြည်သူ့လွှတ်တော် + အမျိုးသားလွှတ်တော်) တွင် အမတ်နေရာ ၃၃၃ အနိုင်ရရှိပါက မိမိတို့စိတ်ကြိုက်သမ္မတတယောက်ကို တင်မြောက်ကာ အစိုးရဖွဲ့စည်းနှိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- သင်လေခြာလေ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး။
Suck = involve (someone) in something without their choosing.
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေခဲ့ရတုံးက ဗာရာဏသီမှာ စာလာသင်ခဲ့တဲ့ အသိဘုန်းကြီးတပါး တိုင်ဝမ်ကိုရောက်နေတဲ့ပုံတင်လိုက်တာ အခုပဲတွေ့တယ်။
Ashin Nipuna ထောင်းယွန်မြို့၊ ထိုင်ဝမ်သို့ ရောက်ရှိ။ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာများက ပန်းစည်းဖြင့်ကြိုဆို။ (Taoyuan city, Taiwan)
မြန်မာစာအရေးအသားနဲ့ မြန်မာစကားပြောကို မကြာမကြာထောက်ပြနေပါတယ်။ မှားတာ၊ လွဲတာ၊ မပီသတာ၊ မယဉ်ကျေးတာတွေရှိသလို မှန်တာ၊ ယဉ်ကျေးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ ပြောမှသာပြည့်စုံပါမယ်။
မနေ့က ချင်းအမျိုးသမီး ကလေးအမေတယောက် ရေးတာကိုနမူနာပေးခဲ့တယ်။ အခုက တရုပ်ကပြားကိုယ်ဝန်ဆောင်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံးကလည်းမေးတယ်။ မွေးပြီးနောက် မိခင်ရော ကလေးပါကျန်းမာကြောင်း ကျေးဇူးတင်စကားလည်း ထပ်ရေးပါတယ်။
ဦးဇင်း - တိုင်ဝမ်ရောက်နေတဲ့ ဗမာပြည်က ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီး ၁-၂ ယောက်က ကျန်းမာရေးမေးတာမှာ နေပြည်တော်နေ ရွှေဗမာတွေထက် မြန်မာစာကို ပြေပြေပြစ်ပြစ် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးရေးတတ်တယ်ဘုရား။
ဒီစာကတော့ ဆေးပညာအမေး-အဖြေ မဟုတ်ပါ။ မြန်မာစာအရေးအသားနဲ့ သတ်ပုံအလွဲအမှားတွေအကြောင်း ခဏခဏရေးလို့ ကျွန်တော့်ကိုအမြင်ကပ်ပြီး ငေါ့လာသူတယောက်ကို တမြန်နေ့က ဘလော့လိုက်ရတယ်။ အခုစာရေး မေးတဲ့သူက ချင်းပြည်နယ်က ကလေးအမေတယောက်ပါ။ သူများနိုင်ငံမှာရောက်နေတယ်။ သူရေးတဲ့စာကို ရွှေဗမာတွေ၊ စိန်မြန်မာတွေကို ဖတ်စေချင်လို့ပါ။ သူရေးတာကို (ကျွန်မ) ကို (ကျွန်မ)၊ (နိူင်) ကို (နိုင်) လို့ ပြင်ပေးတာကလွဲရင် မူရင်းစာအတိုင်းပါ။
Good morning ဆရာရှင့် ကျွန်မနာမည့့် (ချင်းလူမျိုး၊ တီးတိန်) ပါ။ အသက်ကတော့ ၃၃ နှစ်ကျော်ပါ။
သားလေးကတော့ နောက်စက်တင်ဘာမှာ ၁ နှစ်ပြည့်တော့မှာပါ။့့ မှာနေပါတယ်။ ဆရာ့ရဲ့ ဆေးပညာဗဟုသုတနဲ့ တခြားဗဟုသုတတွေကို FB ကနေ အမြဲဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်း အရမ်းတင်ပါတယ်ဆရာ့ကို။ မေးခွန်းတွေလည်း မေးချင်တာ ဘယ်လိုမေးရမှန်းမသိလို့ အမှားပါရင် နားလည်ပေးပါနော်။ ကျွန်မ သားလေးက အိပ်ချိန်လည်း အရမ်းနည်းလွန်းပြီး တစ်ခါအိပ်ရင် နာရီဝက်ထက် ပိုမအိပ်နိုင်ဘူးဆရာ။ တနေ့ အိမ်ချိန်က စုစုပေါင်း ၁၂ နာရီဘဲ ရှိတယ်ဆရာ။ နေ့ခင်းပိုင်းမှာ ၂ ခါအိပ်တယ်။ အမေမရှိရင် မအိပ်နိူင်ဘူးပြီးတော့ အရမ်းလည်း အအိပ်ဆတ်တယ်ဆရာရှင့်။
အားဆေးလည်းတိုက်တယ်။ ၅ လသားအရွယ်ကတည်းက Appeton, Infant 1ml တိုက်တယ်ဆရာ။ သူ့ကို နည်းနည်းလောက် ပိုအိပ်စေချင် ကြာကြာလေးအိပ်စေချင်လို့ပါဆရာရယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါဦး။ အားကိုးပါတယ်ဆရာ။ တနှစ်ပြည့်ရင် အားဆေး ဘယ်လိုမျိုးက သူနဲ့သင့်တော်မလဲ မသိဘူး။ ဒီမှာတော့ Appeton က တော့ ဝယ်ရတာလွယ်တယ် ဈေးလည်း သင့်တယ်လေ။ ဆေးဆိုင်ကတော့ Appeton Multivitamin lysine (syrup) , Appeton Multivitamin Optigrow က ကောင်းတယ်လို့ညွှန်းတယ်။ သားလေးအတွက် ဘယ်လိုအားဆေး ကောင်းမလဲ ကူညီပါဆရာရှင့်။ သားလေး ၆လ ပြည့် ကတည်းက အခုထိ Appeton Essential OMEGA3with Fish oil 1000mg capsul တနေ့တလုံး သောက်တယ်ဆရာ။ ပြီးတော့ ကော်ဖီလည်းမဖြတ်နိုင်လို့ တနေ့တခါ မနက်မှာ white Coffee 40g တဝက်ကို နို့ဆီ ၁ ဇွန်းရောပြီး သောက်တယ်။
အဲဒါတွေကြောင့် သားလေးက မအိပ်နိုင်တာလား မသိဘူးဆရာ။ sorry မေ့သွားလို့ဆရာ ကျွန်မက သားလေးကို မိခင်နို့ဘဲ တိုက်နေတာပါ။ နည်းနည်းတော့ လျှာရှည်ပြီး မေးချင်သေးလို့ပါ ဆရာရှင့်။ ကန်တော့ပါနော်ဆရာ နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့ နာပါနော်။ ကျွန်မ ကလေးမွေးပြီးကတည်းက အခုထိ ထမီမလာသေးဘူးဆရာရှင်။ စိုးရိမ်လို့ပါ။ ထမီလာအောင် လုပ်လို့ရလားဆရာ စိတ်ထဲမှာနေရတာ သိပ်မသန့်လို့ပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ စာရှည်သွားရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်။ ဆရာ့ကို အပြင်မှာမဆုံဖူးပေမယ့် FB ထဲမှာ သိကျွမ်းပြီး စာတွေဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးလည်းတင် အားလည်းကိုးပါတယ်ဆရာ။ ဆရာ့ကို ရိုသေလေးစား လျက့့်
မှားရေး လွဲရိုက်တာကို ခပ်ပေါ့ပေါ့ထင်နေကြသူများ၊ မပီကလာပြောပြီး ယဉ်ကျေးစရာမလိုပါလို့ ထင်နေကြသူများ မှားနေကြမှန်းသိကြပါစေ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကစာနဲ့စကား တတ်သိနားလည်သင့်ကြပါတယ်။